15 FormWork Ties System TieRod/ThreadBar WingNut WaterStopper bracket type resistant high tensile strength steel. – ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ
FORMWORKS / Form Tie Accessories System for Reinforced Slab Wall Floor Concrete Building Construction
GFRP Composite Manhole Covers (ตะแกรงฝาท่อไฟเบอร์ผสมเรซิ่น) www.chancon.co.th GRATING SPECIALIST SOLUTIONS and HOW TO INSTALLATION: Outdoor Round Manhole Covers, Square, Rectangle, Circle Circular, Fabricated Simple Culvert Gully, Tile Strip Cell Ceilings Gratings, Pass way Basement Sidewalk, plastic grid paving, Sealed Manhole, Hand hole Lifting Lifter, Catch Basins, Residential Trench Drainage Cell, Clean out, Driveway Floor Shower Drain Grates, Sewer, Recessed Cover, Pipes Clogged, Ductile Casting Grey Iron, replacement stainless steel, Wood Lumber WPC fiber cement, Checkered Duck plate, Fittings, Sanitary, hatch box, remover, block masonry paving unit, dish drainer, Channel opener, Vessel, Ventilation Valves, Filter, Pool, pump, Ships, Replacing contaminated area, conductive, Corrosion resistance frame, Lattice, Rain Shooter Water, Trash rack, Egg Crate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Filter Media Diffusers Panel, DIY Abstract Plastic material board Pond Marine Aquarium, HVAC air vector acrylic return/Double deflection Grid Louver FRP Products, GFRPS, Glass Fiber Reinforcment Rebar Polymer, Reinforced Fiberglass slab, Composite building materials, vinyl ester resin, Root trunk bollards Tree pit road safety sculpture in decoration, Landscaping Exterior Garden Big tree gratings, Tree Ring Protection Safety Guard Grating Paver Frame Cover Pedestrian, Road Street, molded, pultrusion, pultuded profiles, Covering welded bearing bar compound gratings, Cage Ladders, Staircase treads, non anti slip skid stairways, broad step, tread covers, Handrail, Structural Shaped, Ideal for catwalks, double garage flooring, platforms, trench covers, ditch, spout, screens clad, media support, air mesh, railing, walk way, multi grid, covered, concaved, gritted, minimesh, phenolic, common, unsaturated polyester resin, Palette Partition Doors Windows,Grating_Manhole_Expert | โรงงานผู้ผลิต ขายส่ง-ปลีก | รับสมัคร ตัวแทนจำหน่าย Sales, Dealer, Agent, Distributor
FORMWORKS / Form Tie Accessories System for Structured Wall Stabs
Formwork ສາຍພົວພັນໄມ້ Carpenter System Design: ເຫຼັກ DYWIDAG ລູກຫມາກຄັນກັບກະທູ້ຕະຫຼອດເສັ້ນ (rod ວັດ) ໄດ້ + Wingnut (ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງປີກ) + Suppliers Stopper ນ້ໍາ + ເຫຼັກໂກນ / FormTies Hole ເວັ້ນພື້ນທີ່ຕົວໄຟເບີກາດ / Scaffolding ລາຄາ.
Shanton ຜະລິດແລະຂາຍຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄວາມແຮງສູງ. ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ກັບ formwork ທັງຫມົດຂະຫນາດ, ເຊັ່ນ: ການຮັກສາຝາຜະຫນັງຄອນກີດ (ທັງໃຕ້ດິນແລະເທິງຫນ້າດິນ) ຖັງນ້ໍາຄານ Stanchions ອ່າງເກັບນ (ທັງໃຕ້ດິນແລະເທິງຫນ້າດິນ), tank ຂ້າເຊື້ອ, manholes, ສຽງໂຫວດທັງຫມົດ. Precast concrete ແລະທັງຫມົດການໂຍນ casting ທາດເຫຼັກ, ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການເຮັດວຽກທີ່ມີຊີມັງຂະຫນາດໃຫຍ່. ອຸປະກອນການຕິດຕັ້ງມີຢູ່ໃນຫຼາຍປະເພດ, ປະເພດແລະຂະຫນາດຕ່າງໆ. ປະກອບມີການຮູບແບບວົງເລັບເຫລັກ, esp Libertines, Wing ແກ່ນ, ຂໍ່ກະດູກ, ນ້ໍາ, ແກ່ນຂອງຫມາກໄມ້, ຫົກຂອງຄື້ນຟອງເຫຼົ່ານີ້ຄູ່ຮ່ວມງານ, ໄລປະຕູ, locks, ປວດຂໍ້ກະດູກຊື່, ຊົມເຊີຍຍົກຍ້ອງໂກນ, ພາກຮຽນ spring clamp, clamp wedge, ຢາງ scaffolding ເຮັດດ້ວຍໂລຫະສະຫລາຍໄປ. ມີ polycarbonate, ແລະອື່ນໆ.
ຮູບແບບການເຮັດວຽກ Tie riveted dywidag ຕະຫຼອດເສັ້ນແມ່ນເຫຼັກກ້າທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອແນບເຄື່ອງໃຫຍ່ເພື່ອຖານຂອງໂຮງງານ. ຫລືໃຊ້ແບບຄອນກີດສະແຕນເລດກໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອໃຫ້ສາມາດຄັດລອກແບບຄອນກີດທັງສອງແບບຮ່ວມກັນ. ນໍາໃຊ້ໃນການປະສົມປະສານກັບ Wing Nut / Water Stopper / Steel Cone / Spring Clip Clamp / Accessories.
ໃບຮັບຮອງ Dywidag Tie Rod Threadwork Benefit / Benefit ຈາກການນໍາໃຊ້ການສວມໃສ່ຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ.
ເນື່ອງຈາກແຖບ rod rod ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ມີແຜ່ນ DYWIDAG, ຊຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກເສັ້ນດ່ຽວທົ່ວໄປຫຼື spiral ໃນຕະຫຼາດ. ເຮັດໃຫ້ knots ໄວຂຶ້ນແລະງ່າຍຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄຸນລັກສະນະຂອງເສັ້ນໄຍຂະຫນາດນ້ອຍຈະເຮັດວຽກດີເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາແມ່ນເປື້ອນຫຼືຂົມຂື່ນ. ມີ DYWIDAG ກ້ຽວວຽນຫຍາບ, ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງກ້ານກ້ານແມ່ນກວ້າງກວ່າກຽວ. ຈໍານວນຂອງຮອບເພື່ອ tighten ຫມາກແຫ້ງໄວໄດ້ໄວຂຶ້ນ. ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະຊຸມ ຖອດອອກໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ, 50% ຕ່ໍາກວ່າເຫຼັກທົ່ວໄປ, ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້, ເຄື່ອນຍ້າຍຫຼືຍົກຂຶ້ນມາພ້ອມກັນປະຫຍັດແລະໄວຂຶ້ນ. ງ່າຍກວ່າຄວາມຍາວຂອງຄວາມຍາວສູງສຸດ 12 ແມັດສາມາດຕັດຄວາມຍາວຂອງແມ່ແບບທີ່ຈະຂຸດລົງຊີມັງ. ຂະຫນາດທັງຫມົດແມ່ນ 60cm, 80cm, 1 ມ,2ມ,4ມ,6ມ, ຫຼື 12 ມ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນເວລາດົນປານໃດ. ຄວາມແຂງແຮງຂອງເຫຼັກກ້າຍັງດຽວກັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເອົາຂະຫນາດການຕັດແຕ່ລະຄົນກັບຄືນໄປບ່ອນຫຼືສະຫລັບກັບຄວາມຈຸເຕັມ.
TieRod / ThreadBar, Anchorage Spherical, Nut Washer, Coupler Specification (High Strength Special Diameter)
Thread / Smooth Bar | ອຸປະກອນສະຫວ່ານອະວະກາດ: Lock_Nut Square / ແຜ່ນສີ່ຫລ່ຽມ / ເຄື່ອງຊັກຜ້າ | Coupler: Straight Round / thin with Screw | ທໍ່ / ກາວໂລຫະໂລຫະ |
ພວກເຮົາແມ່ນຜູ້ສະຫນອງທີ່ສໍາຄັນຂອງອຸປະກອນປະກອບແບບເຕັມຮູບແບບລວມທັງແຖບສາຍເຕັມ, ເສັ້ນຜ່າກາງແລະຄູ່ກັນໃນຄວາມເຂັ້ມແຂງຕ່າງໆ. ສອດຄ່ອງກັບ ASTM A722 ແລະ BS4486: 1980 ແລະທຸກມາດຕະຖານສາກົນທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆ. ຜະລິດພາຍໃຕ້ລະບົບການຄວບຄຸມຄຸນະພາບ ISO9001: 2008. ຫົວຂໍ້ແບບຕໍ່ເນື່ອງແບບໂລຫະຮ້ອນສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງພັນທະບັດສູງ, ສາມາດຕັດແລະບວກກັບຈຸດໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບກົນຈັກ, ການຕິດຕັ້ງແລະການທໍາຄວາມສະອາດງ່າຍ. ສະຫນັບສະຫນູນທີ່ມີອຸປະກອນທີ່ມີເອກະລັກຕ່າງໆເພື່ອຮອງຮັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຫຼາຍຢ່າງ. ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເຮັດດ້ວຍເຄື່ອງຕັດຫຍິບກໍ່ສາມາດຖືກອອກແບບມາໃນແຕ່ລະກໍລະນີ. ລະບົບການປ້ອງກັນການກັດກ່ອນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ geotechnical ຕາມມາດຕະຖານ BS8081 ຫຼືມາດຕະຖານສາກົນອື່ນໆ. ການບໍລິການເສີມມູນຄ່າເພີ່ມລວມທັງການເຊົ່າເຄື່ອງອຸປະກອນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການຕິດຕັ້ງ, ການກະກຽມວິທີການຈັດການ, ການຕິດຕັ້ງແລະການຕິດຕັ້ງ.
ບາ, ໄດ້ເວົ້າລົມກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ -> Post The-ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ Bar ແມ່ນ tendons ໄດ້ – ໃນແບບຟອມ Ties> -> A Mini ແລະເປັນ Piles Micro -> ພື້ນ ,, ຫມໍ -> ຕະປູ, ດິນ -> Rock, ຫົວໃຈໃນແກ້ວແມ່ນ -> ເປັນແທ່ງ Tie ເປັນ -> ແລະການເປີດຕົວຍົກຫນັກ -> Hangers ເປັນແທ່ງແລະ Suspension ຢາງ.
1) ສອດຄ່ອງກັບ ASTM A722 ແລະ BS4486: 1980 ແລະມາດຕະຖານສາກົນທັງຫມົດທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆ. ຜະລິດພາຍໃຕ້ລະບົບການຄວບຄຸມຄຸນະພາບ ISO9001: 2008
2) ກະດາດແຂໍງແຮງທົນທານທີ່ມີຄວາມແຂໍງແຮງສູງສາມາດຕັດແລະຈັບຄູ່ໄດ້ທຸກເວລາຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍຄວາມເສຍຫາຍທາງກົນທີ່ງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕັ້ງແລະເຮັດຄວາມສະອາດ 3) ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກອຸປະກອນທີ່ມີເອກະລັກຕ່າງໆເພື່ອຮອງຮັບການໃຊ້ງານຫຼາຍຢ່າງ. ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເຮັດດ້ວຍເຄື່ອງຕັດຫຍິບກໍ່ສາມາດຖືກອອກແບບມາໃນແຕ່ລະກໍລະນີ. 4) ລະບົບການປົກປ້ອງການກັດກ່ອນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ geotechnical ຕາມ BS8081 ຫຼືມາດຕະຖານສາກົນອື່ນໆ.
5) ບໍລິການເສີມມູນຄ່າເພີ່ມລວມທັງການເຊົ່າເຄື່ອງອຸປະກອນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການຕິດຕັ້ງ, ການກະກຽມວິທີການຈັດການ, ການຕິດຕັ້ງແລະການຕິດຕັ້ງ, ແລະອື່ນໆ.
ລະບົບຂອງພວກເຮົາມີຫລັກກະທູ້ມີຄຸນນະພາບສູງຂອງຊັ້ນຮຽນຕ່າງໆ, ເຖິງທາງສ່ວນຫນ້າຂອງເນັ້ນຫນັກຄຸນນະພາບເຫຼັກ, ໃນລະດັບຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງຈາກ 15 ເຖິງ 75 ມມ. ພວກເຮົາສະຫນອງວິທີແກ້ໄຂລະບົບຕ່າງໆສໍາລັບຊະນິດຂອງຈຸດປະສົງວິສະວະກໍາດ້ານວິຊາການ, ລວມທັງກະທູ້ບ່ອນຈອດເຮືອແຖບຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ແລະຂຸດອຸໂມງ, ມີສາຍພົວພັນການເສີມແຮງສາຍພົວພັນແບບຟອມ, rods ແລະນໍາໄປຖີ້ມ, ຕະປູດິນ, piles ຈຸລະພາກ, ກ້ອນຫີນແລະບ່ອນຈອດເຮືອດິນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກພີເຊັ່ນດຽວກັນກັບທາງສ່ວນຫນ້າຂອງເນັ້ນຫນັກ. tendons ສໍາລັບ posttensioning ຍັງໄດ້ນໍາໃຊ້ສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່, ຮູບແບບແລະສະຖານທີ່ແລະໄດ້ຕິດຕັ້ງໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນທົ່ວໂລກ. ບໍ່ວ່າຈະສໍາລັບການກໍ່ສ້າງ, ຂຽນ, ຂົວຫລືເສັ້ນທາງກໍ່ສ້າງ, tunneling ຫຼືຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ພວກເຮົາສາມາດສະຫນອງໃຫ້ແກ່ເຫຼັກທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບວຽກເຮັດງານທໍາໄດ້ເຮັດໄດ້. ໃນຂະແຫນງວິສະວະກໍາເຕັກໂນໂລຢີ, ຜະລິດຕະພັນລະບົບຂອງພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຜູ້ສະຫນອງຊັ້ນນໍາໃນໂລກທີ່ມີເສັ້ນດ່າງເສັ້ນດ້າຍຮ້ອນ.
System Post-Tensioning Strand ລະບົບການຖອດລະຫັດຜ່ານ Bar | ຊ່ອມແຊມໂຄງສ້າງ | Geotechnics | ຜະລິດຕະພັນຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ | ການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານເຕັກນິກແລະການບໍລິການເສີມສ້າງຄອນກີດ Shop Drawing and Methodology | ມູນຄ່າວິສະວະກໍາ | PT Management on Site | ການຄົ້ນຄວ້າແລະການພັດທະນາ | ແຖບເສັ້ນດ້າຍເຫຼັກກ້າສູງ
ລະບົບບັນຊີຂອງ Post-tensioning Thread
ສາຍແຂນບາແມ່ນທາງເລືອກທໍາອິດຂອງວິສະວະກອນໂຍທາສໍາລັບການອອກແບບໂຄງສ້າງທີ່ມີເສັ້ນດ່າງສາຍແຂນ ບໍ່ເຫມາະສົມຫຼືບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້. ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສູງແມ່ນໄດ້ຖືກສະຫນອງໃຫ້ຕະຫລອດລະດັບຂອງເຫຼັກຕ່າງໆ, ເສັ້ນຜ່າກາງແລະຮູບຮ່າງຂອງແຖບແລະການເລືອກລະຫວ່າງສາຍແຂນບາບທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກບີບບັງຄັບຫຼືບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ. ລະບົບ BBV ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ແລະວິທີການທີ່ຈໍາເປັນທີ່ເຫມາະສົມໃນການປະຕິບັດ. ລູກຄ້າຍັງສາມາດໃຊ້ປະໂຍດຈາກລະບົບບາຕ່າງໆທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ລະບົບຂອງລະບົບປະຕິບັດການຕິດຕັ້ງປະກອບມີລະບົບການທົດສອບແລະການທົດສອບສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຫຼາຍໆປະເທດໃນໂລກຂອງການກໍ່ສ້າງ:
PT Bar Systemsແມ່ນການສະເຫນີຜະລິດຕະພັນແຖບຢ່າງກວ້າງຂວາງເປັນອົງປະກອບດຽວຫຼືເປັນລະບົບການຕິດຕັ້ງກ່ອນ. ສໍາລັບຂະຫນາດແລະລະດັບແຖບແລະລະດັບຂອງລະບົບພາທະນາຍຄວາມທີ່ກໍາຫນົດເອງກະລຸນາເບິ່ງມາຕາຖານຕໍ່ໄປນີ້. ລະບົບແຖບຫຼືລະບົບແຖບທີ່ບໍ່ສາມາດສະຫນອງໄດ້ຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍ. ແຖບສະແຕນເລດຢ່າງແຂງແຮງ
ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແຖບເຫຼັກທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ມີເສັ້ນຜ່ານມາແມ່ນຜະລິດຈາກມ້ວນຮ້ອນທີ່ມີເສັ້ນໄຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ອຸປະກອນທີ່ເປັນຫມາກຖົ່ວຫຼືຄູ່ຜົວເມຍສາມາດຖືກ screwed ໃນແຖບຢູ່ຈຸດໃດຫນຶ່ງຂອງແຖບ. ເສັ້ນຜ່າກາງຕັ້ງແຕ່ 18 ມມເຖິງ 50 ມມ, ຂຶ້ນກັບລະບົບທີ່ເລືອກ. ແຖບມີຢູ່ໃນລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈາກ 835/1030 ເຖິງ 1080/1230 (fp01k / fpk [N / mm2]). SMOOTH HIGH STRENGTH STEEL BARS
ແຖບເຫລໍກທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ລຽບງ່າຍແມ່ນຜະລິດຈາກກະແສຮ້ອນທີ່ມີເສັ້ນດ່ຽວທີ່ມີເສັ້ນໃຍເຢັນຢູ່ທີ່ປາຍທັງສອງ. ເສັ້ນຜ່າກາງຕັ້ງແຕ່ 20 ມມເຖິງ 75 ມມຂຶ້ນໄປ, ອີງຕາມລະບົບທີ່ເລືອກ. ແຖບມີຢູ່ໃນລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈາກ 835/1030 ເຖິງ 1080/1230 (fp01k / fpk [N / mm2]).
Barres ເຕັມ ແຖບ Barsx ແຖບເຫຼັກຂອງລະດັບ 500/555 ຫຼື 555/700 ແມ່ນມີຢູ່ໃນເສັ້ນຜ່າກາງຈາກ 25 ມມເຖິງ 63.5 ມມ. ແຖບທີ່ຜິດປົກກະຕິເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຜະລິດອອກຈາກແຖບເຫຼັກມ້ວນຮ້ອນດ້ວຍເສັ້ນດ້າຍຊ້າຍມືຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. TEREX BARS ບາງສ່ວນ Threaded Bar
ບໍລິສັດ TEREX Bar ຊັ້ນເລີດຂອງພວກເຮົາທີ່ມີສິດທິບັດໂດຍບໍລິສັດ BBV Systems GmbH ແມ່ນມ້ວນເສດຖະກິດໂດຍວິທີທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບການເສີມຂະຫຍາຍປົກກະຕິແຕ່ເປັນຮູບແບບທີ່ມີເສັ້ນດ່າງ. ມີ TEREX ຂອງພວກເຮົາບໍ? ບາແມ່ນຄູ່ຜົວເມຍຂອງຄູ່ຜົວເມຍຄູ່ຜົວເມຍຄູ່ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບຄູ່ຜົວເມຍໄວແລະງ່າຍດາຍຂອງແຖບ misaligned. TEREX? ລະບົບພາທະນາຍຄວາມສະຫນອງການໃຊ້ເວລາທີ່ທັນສະໄຫມແລະການປະຫຍັດແຮງງານ, ແຕ່ທາງເລືອກທີ່ມີລາຄາເຫມາະສົມກັບການເສີມທາດເຫຼັກປົກກະຕິ. ສົ່ງເສີມພາທະນາຍຄວາມແມ່ນ CONCRETE Deformed ນີ້
ສີມັງ, ປະເດັນຫລັກໆຕື່ມຄລິບ Rebars ສັ້ນບາ.ສາມາດໄດ້ຮັບການ rolled ໃນສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານມອກທ້ອງຖິ່ນ ມາດຕະຖານເຊັ່ນດຽວກັນກັບມາດຕະຖານສາກົນຕ່າງໆ (ເຊັ່ນ: JIS, BS, DIN, ທະນາຄານ ANZ, ກະປ໋ອງ). Rolled ຜິດປົກກະຕິບາ Standard The ຮ້ອນ EASY ໃນເພື່ອ Range ເສັ້ນຜ່າສູນກາງລະຫວ່າງ 8 ແລະ 40 ມມ Breakthrough mm Breakthrough ສາມາດ VALUE ເພີ່ມເຕີມເພີ່ມຜ່ານການຕັດຂອງມັນ, ແຜ່ນເຫຼັກແລະແກ້ໄຂການ Rebars ແລະ, Cages ທາງສ່ວນຫນ້າຂອງ fabricated ໂດຍ BBV Systems-ຈໍາກັດ,
ກ່ຽວກັບແບບຟອມ Ties ມີທົ່ວໄປແລະນໍາໄປຖີ້ມໃນການນໍາໃຊ້. ກະດານປະກອບຮູບແຕ້ມຮ່ວມກັນແລະທົນຄວາມກົດດັນຈາກຄອນກີດສຽງໃຫມ່ຈົນກ່ວາສະມາຊິກໂຄງປະກອບມີພຽງພໍທີ່ຈະປະຕິບັດການໂຫຼດທີ່ຕາຍແລ້ວ. ອຸປະກອນເສີມທີ່ແຕກຕ່າງກັນກັບລະດັບສູງ BB Bar ຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 15 ຫຼື 20 ມມຄ້າຍຄືຫມາກໄມ້ປີກຫຼື Couplers ຢຸດນ້ໍາສາມາດໄດ້ຮັບການສະຫນອງໃຫ້ເພື່ອຄວາມສະດວກປະກອບແລະ dismantling. SUSPENSION RODS
ເສົາຄຄຄຄຄຄຄຄຄຄຄສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ຊົ່ວຄາວຫຼືຖາວອນ. ແຖບຈັບຊົ່ວຄາວແມ່ນໃຊ້ເພື່ອຍົກ, ຖືແລະຫຼຸດລົງຫນັກຫນັກເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ໂດຍເຄນ, ເກຍ, ເກຍຫຼືອຸປະກອນໄຮດໍລິກອື່ນໆ. ການນໍາໃຊ້ໂລຫະປະສົມທີ່ຕິດກັບຂົວທີ່ກວມເອົາໂຄງປະກອບສາຍແຂນຫຼືແຂນ suspension ແລະໂຄງສ້າງຂອງມັນກໍ່ສາມາດຖືກຈັດຂື້ນຢ່າງຖາວອນໂດຍບໍ່ມີການສະຫນັບສະຫນູນໂຄງສ້າງ.
ຂອງຫຼືບ່ອນຫນັກ ການຍົກຫນັກແລະວິທີຫຼຸດຜ່ອນລະບົບປະກອບດ້ວຍຂອງບາ Bar, ກະທູ້ຄວາມສູງຂອງ BB ທີ່ເຫມາະສົມແລະມີເສັ້ນຜ່າກາງຂອງທັງຫມົດອຸປະກອນເສີມການຍົກສະເພາະສະກຸນເງິນແກ່ນແລະ, Couplers tapered, ດັ່ງກ່າວໃນຖານະເປັນ Split ໄດ້. ແຖບສາມາດຍົກຫຼືຫຼຸດລົງໄດ້ໂດຍວິທີການຂອງປ່ອງທະເລໄຮດໍລິກແລະຕໍາແຫນ່ງແຖບຕົວຈິງສາມາດໄດ້ຮັບການລັອກຂື້ນໂດຍການແບ່ງແກ່ນເທິງບ່ອນນັ່ງຮູບເງົາ.
ພວກເຮົາກໍາລັງສຸມໃສ່ການຕິດຕັ້ງແລະລະບົບ geotechnical ສໍາລັບການກໍ່ສ້າງ. ໂດຍສະເພາະສີ່ຂົງເຂດຕົ້ນຕໍຂອງການກໍ່ສ້າງຈະ ໄດ້ຮັບການບໍລິການໂດຍບໍລິສັດທີ່ມີລະບົບກໍານົດໄວ້ແລະຜະລິດຕະພັນເຊັ່ນ: ໂຄງສ້າງພົນລະເຮືອນ, ພີພົນລະເຮືອນ, tunneling ແລະຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ແລະການເສີມແຮງສີມັງ,. ຫມວດ geotechnical ພົນລະເມືອງກວມເອົາທຸກໂຄງສ້າງທົ່ວໄປແລະພິເສດແລະວິທີການກໍ່ສ້າງຂອງວິສະວະກອນໂຍທາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກົນໄກຂອງດິນ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ປະເພດລະບົບຂອງ? / CIVIL, ພີມູນລະນິທິ PRODUCT ຂອງທ່ານສໍາລັບເສົາເຂື່ອນ, Quays ,, jetty, Pits, ກໍ່ສ້າງອື່ນ, ຮັກສາ, ແພງ, Reinforcement ດິນ, Slope, A Piles Mini ຂອງສະຖຽນລະພາບ, ຍົກລະດັບ, ສະຫມໍ, The Piles Tension, ຕະປູ, ດິນ, ພື້ນ ,, ຫມໍ, ເປັນແທ່ງ Tie ແມ່ນ
NAILS ດິນ. ດິນເລັບຕາມການອະນຸມັດຂອງເຢຍລະມັນຫຼືຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງລູກຄ້າສາມາດສະຫນອງໃຫ້ເປັນເລັບຊົ່ວຄາວຫຼືເປັນເລັບຖາວອນ. ແຖບແຮງດັນທີ່ຝັງຢູ່ໃນແຜ່ນຊີມັງແມ່ນຂີ້ເຫຍື້ອເບຍລະດັບຕ່ໍາ Barex ຫຼື Terex ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 16, 20, 25, 28, 32, 40 ແລະ 50 ມມ. ໃນກໍລະນີພິເສດກໍ່ສາມາດໃຊ້ BB BB bars ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງເພື່ອສ້າງເລັບທີ່ເຫມາະສົມ.
MINI PILES Mini Piles ອີງຕາມການອະນຸມັດຂອງເຢຍລະມັນຫຼືຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງລູກຄ້າທີ່ມີລະບົບປ້ອງກັນການກັດກ່ອນດຽວຫຼືສອງເທົ່າ. Barex or Terex Bars of diameter nominal 635 mm Barex or Terex Bars of diameter nominal 28,32,40 and 50 mm UPLIFT ANCHORS
RODS, ໄດ້ລູກຫມາກ Tie ຫຼືເພີ່ມເປັນແທ່ງຝາຫລັງ Tie ມີລະບົບໂຄງສ້າງຂອງກໍາແພງຍັງຄົງສາ Single ເຊື່ອມຕໍ່ຫຼືເພີ່ມ (ຄາດ) ເອກະສານສອງ opposing ນີ້ຫຼືເພີ່ມ bored kinda Pile ແພງ Pile ແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຈາກການຍຸບໃນລະຫວ່າງການຂຸດຄົ້ນແລະ backfill ໄດ້ໃນລະຫວ່າງການສອງກໍາແພງ. ການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປແມ່ນການເຊື່ອມຕໍ່ທະເລທີ່ນໍາໃຊ້ເພື່ອປົກປັກຕາກໍາແພງຫີນແບບຖາວອນຮ່ວມກັນທີ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ເພື່ອສ້າງກໍາແພງຫີນຫຼັງຈາກນັ້ນ. TENSION PILES
ແຮງດັນໄຟຟ້າພາຍໃຕ້ການໂຫຼດແບບເຄື່ອນໄຫວສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດ້ວຍການປ້ອງກັນການກັດກ່ອນ (SCP) ຫຼືການປ້ອງກັນການກັດກ່ອນ (DCP) ຕາມເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌. Splices ໃນກໍລະນີນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍຄູ່ຜົວເມຍແລະແກນ lock ໂມດູນ. ການຜູກມັດແມ່ນການປ້ອງກັນການກັດກ່ອນໂດຍວິທີການຂອງ tape petrolatum ແລະຄວາມຮ້ອນຂອງແຂນ shrink.
Formwork Panel Scaffolding and Concrete Forms
ຮູບແບບໄມ້ປະດັບພື້ນເມືອງການສ້າງແບບ ຟອມແມ່ນໄດ້ສ້າງຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງໄມ້ແປຮູບແລະໄມ້ອັດຫຼືໄມ້ປ່ອງທີ່ທົນທານຕໍ່ຄວາມຊຸ່ມ. ມັນງ່າຍທີ່ຈະຜະລິດແຕ່ໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າເກົ່າສໍາລັບໂຄງສ້າງຂະຫນາດໃຫຍ່, ແລະການປະເຊີນຫນ້າກັບໄມ້ໄຜ່ມີຊີວິດສັ້ນ. ມັນຍັງຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງບ່ອນທີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຮງງານຕໍ່າກ່ວາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊື້ຟອມທີ່ໃຊ້ຄືນໄດ້. ມັນຍັງເປັນປະເພດທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ສຸດຂອງຮູບຮ່າງ, ດັ່ງນັ້ນເຖິງແມ່ນບ່ອນທີ່ລະບົບອື່ນໆກໍາລັງໃຊ້, Engineered Formwork System
ຮູບແບບນີ້ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາຈາກໂມດູນທີ່ມີຄວາມເຫມາະສົມກັບກອບໂລຫະ (ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນເຫຼັກຫຼືອາລູມິນຽມ) ແລະກວມເອົາການນໍາໃຊ້ (ຊີມັງ). ທັງສອງຂໍ້ທີ່ສໍາຄັນຂອງລະບົບ formwork, ເມື່ອປຽບທຽບກັບ formwork ໄມ້ດັ້ງເດີມ, ມີຄວາມໄວໃນການກໍ່ສ້າງ (ລະບົບ modular ເຂັມ, ຄລິບ, ຫຼື screw ກັນຢ່າງວ່ອງໄວ) ແລະຕ່ໍາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຊີວິດຂອງວົງຈອນ (barring ຜົນບັງຄັບໃຊ້ທີ່ສໍາຄັນ, ພາແມ່ນ indestructible ເກືອບ, ໃນຂະນະທີ່ການກວມເອົາໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າເຮັດດ້ວຍໄມ້; ອາດຈະຕ້ອງ ໄດ້ຮັບການທົດແທນຫຼັງຈາກສອງສາມ – ຫຼືອາຍແກັສຈໍານວນຫນ້ອຍຫນຶ່ງ – ການນໍາໃຊ້, ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າການປົກຫຸ້ມຂອງແມ່ນເຮັດດ້ວຍເຫຼັກຫຼືອາລູມິນຽມຮູບແບບສາມາດບັນລຸເຖິງສອງພັນໃຊ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບການດູແລແລະການປະຍຸກ). formwork ພາດສະຕິກທີ່ສາມາດໃຊ້ຄືນໄດ້.
ລະບົບປະສົມປະສານແລະໂມດູນເຫຼົ່ານີ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສ້າງຕົວປ່ຽນແປງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ແຕ່ງ່າຍດາຍ, ໂຄງສ້າງຂີ້ເຫຍື້ອ. ແຜງມີນ້ໍາຫນັກເບົາແລະແຂງແຮງຫຼາຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນເຫມາະສົມໂດຍສະເພາະສໍາລັບໂຄງການທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ. ແບບຟອມຕິດຕັ້ງແບບຖາວອນ. ແບບຟອມນີ້ແມ່ນປະກອບຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌, ປົກກະຕິແລ້ວອອກຈາກແບບຟອມຊີມັງ (ICF). The formwork ຄົງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ພາຍຫຼັງທີ່ຊີມັງໄດ້ ຮັບການປິ່ນປົວ, ແລະອາດຈະໃຫ້ຄວາມໄດ້ປຽບໃນການຄວາມໄວ, ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, insulation ຄວາມຮ້ອນແລະລັກສະນະສຽງທີ່ເຫນືອກວ່າພື້ນທີ່ທີ່ຈະດໍາເນີນການງົບປະມານຂອງພາຍໃນ layer EPS, ແລະອອກ furring ວົງຈອນສໍາຫລັບຄວາມສໍາເລັດ cladding. Coffor
ແມ່ນລະບົບການສ້າງແບບຟອມທີ່ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເພື່ອສ້າງໂຄງສ້າງໃນຊີມັງ. ມັນປະກອບດ້ວຍສອງຕາຂ່າຍການກັ່ນຕອງທີ່ໄດ້ຮັບການເສີມຂື້ນໂດຍ stiffeners ຕັ້ງແລະເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສາມາດ folded ສໍາລັບການຂົນສົ່ງ. ກະດານມາດຕະຖານ 1.10 mx 2.70 m (3 ‘8 x 9) ມີນໍ້າຫນັກ 327 kg (72 lbs) ແລະສາມາດນໍາດ້ວຍມືຫຼືເຄື່ອງມືໃດໆ. ຫຼັງຈາກທີ່ Coffor ຖືກວາງໄວ້, ຊີມັງໄດ້ຖືກຮວບຮວມຢູ່ລະຫວ່າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ: ນ້ໍາຫຼາຍຂອງຊີມັງຖືກລົບລ້າງໂດຍແຮງໂນ້ມຖ່ວງແລະທາງອາກາດຖືກລົບລ້າງ. Coffor ຍັງຄົງຢູ່ໃນການກໍ່ສ້າງຫຼັງຈາກທີ່ຄອນກີດຖືກຂຸດລົງແລະເປັນການເສີມສ້າງ. ການກໍ່ສ້າງໃດກໍ່ຕາມສາມາດກໍ່ສ້າງໄດ້ໂດຍ Coffor: ບ້ານເຮືອນ, ຕຶກອາຄານຫຼາຍຊັ້ນລວມທັງອາຄານສູງ, ອາຄານອຸດສາຫະກໍາ, ການຄ້າຫຼືການບໍລິຫານ. ຫລາຍປະເພດຂອງວຽກງານການກໍ່ສ້າງສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍ Coffor. Coffor ແມ່ນສະມາຊິກທັງຫມົດຈາກໂຮງງານ. ບໍ່ມີກອງປະຊຸມທີ່ຈໍາເປັນໃນການກໍ່ສ້າງສະຖານທີ່.
ລະບົບການສ້າງແບບຟອມທີ່ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຢູ່. ແບບຟອມນີ້ແມ່ນປະກອບຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌, ປົກກະຕິແລ້ວອອກຈາກຮູບແບບພາດສະຕິກເສີມສ້າງເສັ້ນໄຍແບບ prefabricated. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຢູ່ໃນຮູບຮ່າງຂອງທໍ່ຮູ, ແລະຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປສໍາລັບຖັນແລະ piers. The formwork ຄົງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ພາຍຫຼັງທີ່ຊີມັງໄດ້ ຮັບການປິ່ນປົວແລະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນແກນແລະ shear reinforcement, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການໃຫ້ບໍລິການຈໍາກັດຂອບເຂດຊີມັງໄດ້ແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ກັບຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຊັ່ນ: ຮອບວຽນ corrosion ແລະ freeze, thaw. Flexible formwork
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມກັບແມ່ພິມ rigid ອະທິບາຍຂ້າງເທິງ, formwork ປ່ຽນແປງເປັນລະບົບທີ່ນໍາໃຊ້້ໍາຫນັກເບົາ, ແຜ່ນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງຂອງ fabric ທີ່ຈະໄດ້ປຽບຂອງຄວາມລື່ນໄຫລຂອງສີມັງ, ແລະສ້າງເຫມາະສູງ, ຫນ້າສົນໃຈຖາປັດຕະຍະ, ຮູບແບບການກໍ່ສ້າງໄດ້. ການນໍາໃຊ້ຮູບແບບທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນມັນກໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໂຄງສ້າງທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ໃຊ້ຊີມັງຫນ້ອຍກວ່າພາກສ່ວນ prismatic ທຽບເທົ່າ, ດັ່ງນັ້ນສະເຫນີໂອກາດທີ່ຈະປະຫຍັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໂຄງສ້າງໃຫມ່ຂອງຊີມັງ.
FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING, Ductile-Cast-Iron HOUSES COVER, Swimming Overflow ຂີ້ຝຸ່ນ Gully Gutter Grilling, Grilled Crate ໄຂ່, Tree Guard Grating, Garbage Trap Grill, ການປົກຫຸ້ມຂອງຊັ້ນ, louvers, blinds, grilles, grilles, ກອງແສງ / ອາກາດ / ventilators
GFRP Composite Manhole Covers (grating cover tube ຊິນ fiber) www.chancon.co.th ຄວາມກະຕັນຍູ SOLUTIONS ອອກແບບແລະວິທີການຕິດຕັ້ງ: ນອກຮອບ Manhole ປົກ, Square, ຮູບສີ່ແຈສາກ, Circle ວົງ, ປະດິດ Simple Culvert Gully, Tile Strip Cell ເພດານຄວາມກະຕັນຍູ. , ຜ່ານວິທີການ Sidewalk Basement, paving ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສຕິກ, ປະທັບຕາ Manhole, ມືຂຸມຍົກນັກກິລາຍົກ, ຈັບອ່າງ, ທີ່ຢູ່ອາໄສນ້ໍບາຍນ້ໍາມືຖື, ຄວາມສະອາດອອກ, ຖະຫນົນລົດແລ່ນຊັ້ນ Grates Drain ອາບນ້ໍາ, Sewer, ພາວະຖົດຖອຍແຜ່ນປິດທໍ່ອຸດຕັນ, ຫນຽວຫລໍ່ສີເທົາ Iron, ທົດແທນເລດ. ເຫຼັກ, ໄມ້ Lumber WPC ໄຟເບີຊີເມນ, Checkered ແຜ່ນ Duck, ອຸປະກອນ, ສຸຂາພິບານ, ຫ້ອງ hatch, ການໂຍກຍ້າຍ, block ຫນ່ວຍ masonry paving, ອາຫານສັ່ງຊື້, ເປີດຊ່ອງ, ເຮືອ, ລະບາຍອາກາດວາວ, ກອງ, ສະນຸກເກີ, pump ໍາປັ່ນປ່ຽນພື້ນທີ່ປົນເປື້ອນ, ການດໍາເນີນການ. , ກອບການຕໍ່ຕ້ານການກັດກ່ອນ, Lattice, Rain Shooter Water,rack ກະຕ່າຂີ້ເຫຍື້ອ, Egg Crate Fluorescent ເພດານ Grille ເຮັດໃຫ້ມີແສງຫນ້າຈໍກອງ Media Diffusers Panel, DIY ບົດຄັດຫຍໍ້ວັດສະດຸພາດສະຕິກກະດານຫນອງນ້ໍາຕູ້ປາ, HVAC ອາກາດ vector ຄືນ acrylic / ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເຮັດໃຫ້ເຫໄປ Double ອາກາດຜະລິດຕະພັນ FRP, GFRPS, Glass Fiber Reinforced Rebar Polymer, Reinforced Fiberglass ຝາອັດປາກຂຸມ, Composite. ອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງ, ນ້ໍາ ester vinyl, bollards ຮາກລໍາຕົ້ນເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນຖະຫນົນຫົນທາງຂຸມ sculpture ຄວາມປອດໄພໃນການອອກແບບ, ທັດ Exterior Garden gratings ຕົ້ນໄມ້ຂະຫນາດໃຫຍ່, ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ Ring ການປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພຂອງກອງ Grating Paver ຍ່າງຕາມຕົວຖ່ວງແຮນ, ຖະຫນົນຫົນທາງຖະຫນົນ, molded, pultrusion, ໂປຣໄຟລ໌ pultuded, ກວມເອົາບາເກິດ welded. gratings ປະກອບ Cage Ladders, treads Staircase, ບໍ່ຕ້ານ stairways ຄວາມຜິດພາດພຽງ skid, ຂັ້ນຕອນຢ່າງກວ້າງຂວາງ, tread ການປົກຫຸ້ມຂອງ, Handrail, Structural ຮູບ, ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການ catwalks, ພື້ນຄູ່ກາລາດ, ສະຖາປັດຍະນ້ໍການປົກຫຸ້ມຂອງ, ditch, ຮາງນ້ໍາ, ຫນ້າຈໍຫຸ້ມ ,.ການສະຫນັບສະຫນູນທາງອາກາດ, ຕາຫນ່າງທາງອາກາດ, ເສັ້ນທາງຍ່າງ, ເສັ້ນທາງຍ່າງ, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຫລາຍ, ກວມເອົາ, ກະຈາຍ, ຂົມ, minimesh, phenolic, ທົ່ວໄປ, unsaturated polyester resin,
Grating_Manhole_Expert | ຂາຍສົ່ງຜູ້ຜະລິດ – ຂາຍຍ່ອຍ | ຕົວແທນການທົດແທນທີ່ຂາຍໄດ້, ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍ ,, ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍທີ່
CHANCON: ແລະໂຮງງານຜະລິດຈໍາຫນ່າຍໂດຍກົງໂດຍບໍ່ມີການຜະລິດເປັນຈາກ Shannon Company ສະຫນາມບິນຜະລິດແລະຂາຍ FRP grating gutters ລະບາຍຄວາມກະຕັນຍູ. Grille Bo lid cover ລະບົບທໍ່ນ້ sewage
Website: Www.chancon. com, Http://GratingThai.com, Http://GratingThai.co.th , http: // Fiberglass Grating – pitting ຫລວງທໍ່ຫລວງ The .com.
ໃນ FaceBook: Www.facebook.com/GratingThai, www.facebook.com A. /FrpFiberGrating.chancon, Www.facebook.com/FrpGrating.ManholeCover
TwitterShare: Https://twitter.com/GratingThai. https://plus.google.com/+ChanconTh
စစ်ကူတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါအမှတ်တရကြမ်းပြင်ကွန်ကရစ်အဆောက်အဦးဆောက်လုပ်ရေးများအတွက် FORMWORKS / Form ကိုတွဲချည်ဆက်စပ်ပစ္စည်းစနစ်။
ချည်နဲ့ DYWIDAG လည်စည်းလှံတံကိုသံမဏိမျဉ်း (လည်စည်းလှံတံ) လျှောက်လုံး + WingNut (တောင်ပံခွံမာသီး) + ရေအဆို့ + သံမဏိကန်တော့ချွန် / Hole Spacing ဖန်မျှင်ထည် FormTies / ငြမ်းစျေးနှုန်းပေးသွင်း: FORMWORKS သစ်လက်သမားဒီဇိုင်းစနစ်ဆက်ဆံရေး။
Shannon လေဆိပ်ကုမ္ပဏီမြင့်မားတဲ့ဆန့အစှမျးသတ်တိကိုဆီးတားဖို့စွဲစေတဲ့ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောရိုးကိုကွန်ကရစ်နံရံများ (မြေအောက်နှင့်မြေပြင်အထက်နှစ်ဦးစလုံး) ရေတိုင်ကီဂိုးဘား stanchion ရေလှောင်ကန် (နှစ်ဦးစလုံးမြေအောက်နှင့်မြေပြင်အထက်), မိလ္လာကန်င့်ကားများ, manholes, သွန်းဆက်ထိန်းထားအဖြစ် formwork အားလုံးအရွယ်အစားနှင့်အတူသုံးနိုင်တယ်။ ကွန်ကရစ် ချပစ်အိမ်သူအိမ်သား – ကြီးမားတဲ့ကွန်ကရစ်နှင့်အတူပလီကေးရှင်းများအားလုံးအမျိုးအစားများကွန်ကရစ်။ နှစ်ဦးစလုံး bracket က၏အစွမ်းသတ္တိ, အမျိုးအစားအသုံးအနှုန်းများအတွက်ပိုမိုစုံလင်လာသငျ့။ ကန်တော့ချွန်, ညှပ်နွေဦး, ညှပ်သပ်, dashed ပလပ်စတစ်အခြေစိုက်စခန်းသတ္တုငြမ်းကြီး၏အားပေးမှုတစ်သံမဏိ bracket ကပုံစံပါဝင်သည်ဟု, ESP Libertines, Wing အခွံမာသီး, အဆစ်, ရေ, အခွံမာသီး, ဤလှိုင်းတံပိုး၏ခြောက်လရှိသော counterpart, သော့ခလောက်, သော့ခလောက်, အဆစ်ဖြောင့်။ စသည်တို့ကို polypropylene ကန်တော့ချွန်, နှင့်အတူ
လည်စည်းလှံတံ / Thread ဘား
Form ကိုတစ်လိမ် dywidag Tyrol နှင့်အတူတွဲချည်လှံတံအလုပ်လုပ်တယ်အဖြစ်မြင့်မားတဲ့ဆန့သံမဏိ (High အစွမ်းသတ္တိ) ကိုဆီးတားဖို့ခွန်အားကြီးမားကုန်ထုတ်လုပ်မှုအခြေစိုက်စခန်းနှင့်အတူ mounting နှင့်အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ သို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းကိုတင်းပလိတ်များကွန်ကရစ်ကြမ်းပြင်လောင်းမြို့ရိုး, ကြီးမား (တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါအမှတ်တရ) နှစ်ဦးစလုံးအတူတကွတင်းပလိတ်များကွန်ကရစ်အလုပ်ကိုင်နိုင်စေဖို့ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ပူးတွဲပါ Wing Nut / ရေအဆို့ / သံမဏိ Cone / နွေ Clip Clamp / သို့မဟုတ်ဖြောင့်က Round Coupler အားဖြင့်အရှည်ကိုတိုးမြှင့်ရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့် တွဲဖက်. အသုံးပြုခဲ့သည်။
မည်သို့ကွန်ကရစ်လောင်းများအတွက်သံမဏိတွဲချည်လှံတံကိုတစ်ဦးပိုမိုလုံခြုံသောအရပ် secure ဖို့လိုင်းတစ်လျှောက်လုံးပေါင်းလိုက်သောနေကြသည်။ နှစ်ဖက်စလုံးက Nut အပေါ်သို့မဟုတ်သင် Coupler နှင့်အတူအရှည်ကိုထည့်သွင်းချင်တယ်ဆိုရင်ကွန်ကရစ်အတူအလုပ်လုပ်ရန် template ကို mounting ရည်ရွယ်သည်။
Frame ကလက်ယာရစ်လှည့်နေတဲ့ကြောင်လိမ်သို့ Rolls-ပူနှင့်အအေး-roll နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူတွဲချည်လှံတံ (မနိုငျသညျ) templates ။ ကြမ်းတမ်းခေါင်လိုင်းမှတဆင့်ပေါင်းလိုက်သောခံရဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒါဟာတင်းပလိတ်များကသင်၏အလုပ် site ကိုမှ Access ကိုစုဝေးဖို့ခိုင်မာတဲ့နှင့်လွယ်ကူပါတယ်။
အဆိုပါ Tri-ခံနိုင်ရည်မြင့်မားဆန့ခွန်အားကိုဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham ထံမှ Formworks Dywidag Tie လှံတံ ThreadBar အကျိုးခံစားခွင့် / အကျိုးရယူပါ။
ကြမ်းတမ်းသောကြိုးစတော့ရှယ်ယာမတူဘဲ DYWIDAG ပေါင်းလိုက်သောသို့မဟုတ်ဈေးကွက်ထဲမှာလိမ်ကြိတ်ဝက်အူအတူသံမဏိတွဲချည်လှံတံကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ screw နှစ်ခုထက်ကပိုမိုမြန်ဆန်လွယ်ကူအောင်။ဒါဟာရေနံစိမ်းတစ်လိမ်ပင်ဖုန်သို့မဟုတ်သံချေးသည်မှန်လျှင်, ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်ပါရှိပါတယ်။
အဆိုပါလိမ်ခေါင်နှင့်အတူကြမ်းတမ်း DYWIDAG သည့်ကြောင်လိမ်အကြားကွာဟမှုသည်ထက်ကျယ်ပြန့်ဖြစ်ပါတယ်အထွေထွေဝက်အူ။ ပိုမိုမြန်ဆန်ဝက်အူအသင်းတော်များ၏ကျည်ပြုလုပ်ခြင်း။ နှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ် ဖြိုဖျက်ပိုမိုလွယ်ကူ
အဆိုပါရွှေ့ဆောင်သောသို့မဟုတ်အဖြစ်ကောင်းစွာစီးပွားရေးနှင့်အရင်ကထက်ပိုမြန်ရုတ်သိမ်းပေးရန်, 50% မှသံမဏိလိမ်အဟောင်းလုပ်သားများထက်ပိုမိုပေါ့ပါး။
12 မီတာရှည်လျားဖို့ဆန္ဒရှိအရှည်တက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပိုမိုအဆင်ပြေ, ကွန်ကရစ်ဖို့မျက်စိ template ကိုတစ်အရှည်မှဖြတ်ခံရနိုင်ပါတယ်။ မဆိုအရှည်, 60cm ရှိမရှိ။ , 80cm ။ , 1M ။ ,2မီလီယံ။ ,4သန်းတန်။ ,6လ။ ဒါမှမဟုတ် 12M ။ အလျားတစ်ခုဖြတ်သငျသညျ။ အဆိုပါ helix ၏အစွမ်းသတ္တိကိုနဂိုအတိုင်းကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ သူတို့ကတစ်ဦးချင်းစီပြီးတော့သေးငယ်တဲ့ဖြတ်ပြန်အပြည့်အဝစွမ်းရည်ဆီသို့ရောက် လာ. , သို့မဟုတ်အပြန်အလှန်ဖလှယ်အသုံးပြုယူပါ။
TieRod / ThreadBar, အလင်းဆုံသည့်ကျောက်ချစခန်း, Nut အဝတ်လျှော်, Coupler Specification (High အစွမ်းသတ္တိအထူးအချင်း) ။
thread / ချောမွေ့ဘား | အလင်းဆုံကျောက်ချစခန်းဆက်စပ်ပစ္စည်း: Lock_Nut ရင်ပြင် / Rectangular ပြား / အဝတ်လျှော် | ။ Coupler: ဝက်အူတွေနဲ့ပါးလွှာ / လမျးဖွောငျ့က Round | ။ ပြွန် / အိမ်မှသွပ် |
WE အမျိုးမျိုးသောစေရန်အတွက်အပြည့်အဝ-Threading လည်စည်းချောင်းတွေ, wingnuts နှင့် couplers အပါအဝင် formwork accessories များအပြည့်အဝအကွာအဝေးကအဓိကထောက်ပံ့ဖြစ်ကြသည်။ ASTM A722 နှင့် BS4486 ဘက်ကလိုက်လျောညီထွေ: 1980 ခုနှစ်အပေါင်းတို့နှင့်တကွအခြားအဓိကနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်း။ 2008 ခုနှစ်ကြံ့ခိုင်ပူလှိမ့်စဉ်ဆက်မပြတ်ချည်ပရိုဖိုင်းကိုမြင့်မားတဲ့နှောင်ကြိုးအစွမ်းသတ္တိကိုကမ်းလှမ်း, မည်သည့်အချက်မှာဖြတ် coupled နိုင်ပြီးစက်မှုပျက်စီးမှုလွယ်ကူသော installation နဲ့သန့်ရှင်းရေးမှအနိမ့်လွယ်ကူစွာထိခိုက်: အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ ISO9001 အောက်မှာထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ မျိုးစုံလျှောက်လွှာထားရှိရန်စီးပွားဖြစ် accessories များကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးနှင့်အတူထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ အပ်ချုပ်ဆိုင်ဖြေရှင်းချက်ကိစ္စတွင်အခြေခံအားဖြင့်တစ်ဦးအမှုအပေါ်လည်းဒီဇိုင်းရေးဆွဲနိုင်ပါသည်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ BS8081 သို့မဟုတ်အခြားနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီဘူမိ application များအတွက်ချေးကာကွယ်မှုစနစ်များသည်နိုင်ပါတယ်။ Value ကို installation ကိုကျင့်သောအကျင့်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန်အရည်အချင်းပြည့်မီန်ထမ်းများ၏ပေးခြင်းစသည်တို့ကိုတပ်ဆင်မှုအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာအလေးပေး၏ငှားရမ်းခ, ကိုင်တွယ်ဘို့နည်းလမ်းထုတ်ပြန်ချက်များ၏ပြင်ဆင်မှု, စုဝေးနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းအပါအဝင်န်ဆောင်မှုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ဘားက, Applications ကို Discussione -> Post ကိုအဆိုပါ-တင်းမာမှုများဘားအဆိုပါရွတ်ဖြစ်တယ် -> Form ကိုဆက်ဆံရေးအပေါ် -> တစ်ဦးက Mini ကိုထိုအခါ Micro နဲ့လိပ်ခေါင်း -> မြေပြင် ,, Anchor -> လက်သည်း, အမြေဆီလွှာ -> ရော့ခ်, Bolt များမှာ -> ချောင်းတွေ, Tie ဖြစ်ပါတယ် -> ထိုအခါအကြီးစားရုပ်သိမ်းဖွင့်လှစ် -> ကြိုးကွင်းချောင်း, အခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားတုရုမြို့။
မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိသံမဏိ Thread ဘား
1) ASTM A722 နှင့် BS4486 ဘက်ကလိုက်လျောညီထွေ : 1980 ခုနှစ်အပေါင်းတို့နှင့်တကွအခြားအဓိကနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်း။ ထုတ်လုပ် ISO9001 အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးစနစ်များကိုရဲ့အောက်မှာ: 2008
2) ကြံ့ခိုင်ပူလွယ်ကူအဆက်မပြတ်ရှင်းပြီ Thread ကိုယ်ရေးဖိုင်အမြင့်ဘွန်းခွန်အားကမ်းလှမ်းခြင်း, မဆိုတာရယ်မှာဖြတ်ခံရနိုင်သလားစက်မှုပျက်စီးခြင်း, သန့်ရှင်းရေးနှင့်လွယ်ကူစွာတပ်ဆင် box ကိုရန်အချက်, အနိမျ့ဖြစ်ပေါ်နိုင်ရှိပါတယ်။
3) ၏ကျယ်ပြန့်နှင့်အတူထောက်ပံ့ မျိုးစုံလျှောက်လွှာထားရှိရန်စီးပွားဖြစ်ဆက်စပ်ပစ္စည်း။ အပ်ချုပ်ဆိုင်ဖြေရှင်းချက်အပေါ်လည်းဒီဇိုင်းရေးဆွဲနိုင်ပါသည်လုပ် ကိစ္စတွင်အခြေခံအားဖြင့်တစ်ဦးအမှု။
4) ဘူမိ application များအတွက်ချေးကာကွယ်မှုစနစ်များ BS8081 သို့မဟုတ်အခြားနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီပေးနိုင်ပါသည်။
5) Value ကို installation ကိုကျင့်သောအကျင့်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန်စသည်တို့ကိုစုဝေးတပ်ဆင်ခြင်း, အရည်အချင်းပြည့်မီန်ထမ်းများ၏ပေးခြင်းတပ်ဆင်မှုအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာအလေးပေး၏ငှားရမ်းခ, ကိုင်တွယ်ဘို့နည်းလမ်းထုတ်ပြန်ချက်များ၏ပြင်ဆင်မှုအပါအဝင်န်ဆောင်မှုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်များကို 15 75 မီလီမီတာကနေချင်း၏အကွာအဝေးအတွက် pre-အလေးပေးသံမဏိအရည်အသွေးမြင့်မှတက်, အမျိုးမျိုးသောအဆင့်၏အရည်အသွေးမြင့်ချည်အရက်ဆိုင်ပါရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့သတ္တုတွင်းနှင့်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတူးဖော်ရေး, အားဖြည့်ဆက်သွယ်မှု, ပုံစံဆက်ဆံရေး, လည်စည်းချောင်းတွေ, မြေဆီလွှာလက်သည်း, မိုက်ခရိုလိပ်ခေါင်း, ကျောက်, မြေဆီလွှာကိုကျောက်ဆူးဘူမိ application များအတွက်အဖြစ် Pre-အလေးပေးဘို့ချည်ဘားကျောက်ဆူးအပါအဝင်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာရည်ရွယ်ချက်များ, အမျိုးမျိုးတို့အတွက်အမျိုးမျိုးသော system ကိုဖြေရှင်းချက်ပေးသညျ။ posttensioning အဘို့အရွတ်။ ဒါ့အပြင်ဆက်သွယ်မှု, formwork နှင့်ကျောက်ချစခန်းအတှကျအသုံးပွုနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အကြီးစားဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများတွင် installed ပါပြီ။ ဖွစျစေ, မြေအောက်, တံတားသို့မဟုတ်လမ်းဆောက်လုပ်ရေး, ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတူးဖော်ရေးသို့မဟုတ်သတ္တုတူးဖော်ရေးတည်ဆောက်ခြင်းများအတွက်, ငါတို့သည်သင်တို့အလုပ်အမှုကိုပြုရနျလိုအပျသံမဏိထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာကဏ္ဍကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်ကထုတ်ကုန်ကျွန်တော်တို့ကိုပူလှိမ့်ချည်ဘား၏ဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစေပြီ။
System ကိုထိုန်ဆောင်မှုများ, ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျကျွန်ုပ်တို့၏:
ပိုကမ်းနားလမ်း Post ကိုအဆိုပါ-တင်းမာမှုတွေဟာ System | ။ Post-တင်းမာမှုများစနစ် bar | ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပြုပြင်ခြင်း | ဘူမိ | သတ္တုတွင်းထုတ်ကုန်များ | ကွန်ကရစ်စစ်ကူနည်းပညာပံ့ပိုးမှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှု | ။ | Drawing များနှင့်နည်းလမ်းစျေးဝယ် Value ကိုအင်ဂျင်နီယာ | ဆိုက်ကိုအပေါ် PT စီမံခန့်ခွဲမှု | သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး | မြင့်မားသောအဆင့်သံမဏိ Thread ဘား
Thread ဘားစနစ်များ post-tensioning
Post ကိုစိတျအပိုငျးကိုစေ့စေ့ဂျာနယ်လစ်ခဲ့အဆိုပါ core processor ကိုအမျှဘားအသုံးပြုခြင်း! ပု, ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာသည်ထိုင်းနိုင်ငံတွင် BBV Systems- ” အင်ဂျင်နီယာများကတီထွင်ပြီးတော့ Installed ရှေ့ဆောင်တစ်ဦး Systems- အဆိုပါ-tensioning ။ (အဆိုပါ PT ဘားဖြစ်ပါသည်)
ဘားပုရွတ်ဖြစ်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည်မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာများ၏ပထမဦးဆုံးရွေးချယ်မှုဟာရွတ်ဘယ်မှာ-ကမ်းနားလမ်း Designs ဖြစ်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်သင့်လျော်သောသို့မဟုတ်မမရှိကြပေ။ မြင့်မားသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အမျိုးမျိုးသောသံမဏိတန်းတစ်လျှောက်လုံးကိုကမ်းလှမ်းတာဖြစ်ပါတယ် , ချင်းနှင့်ဘား၏ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်ကပ်လျက်တည်ရှိသို့မဟုတ် unbonded bar ကိုရွတ်အကြားရွေးချယ်မှု။ BBV စနစ်များလိုအပ်သော Know-ဘယ်လိုထောက်ပံ့ စနစ်တကျလေ့အကျင့်သို့ဒီဇိုင်းများထားရန်နှင့်ဆက်စပ်စနစ်များကို။ ဖောက်သည်အမျိုးမျိုး၏အားသာချက်ယူစေခြင်းငှါ ခြားနားသောဘားစနစ်များကို။ Post ကိုအဆိုပါဘားစနစ်များသည် – ယင်းအဆိုပါ Comprises ရင့်ကျက်၏တစ်ဦး Portfolio tensioning ပြီးတော့ဆောက်လုပ်ရေးလောကီသားတို့သည်အခုနှစ်မှာ Applications ကို၏စနစ်များရဲ့လူအလုံးအရင်းသည်စမ်းသပ်ခံရ:
အဆိုပါ PT ဘား Systems- ဖြစ်ပါတယ်။ဘားထုတ်ကုန်များကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းကမ်းလှမ်း တစ်ခုတည်းအစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်သို့မဟုတ် Pre-စုဝေးစနစ်များအဖြစ်လည်းကောင်း။ ရရှိနိုင်ဘားအရွယ်အစားနှင့်အဆင့်အဖြစ်ကောင်းစွာများအတွက် အဖြစ်ထုံးစံလုပ်ဘားစနစ်များ၏အကွာအဝေးကိုအောက်ပါမက်တရစ်ကိုဖတ်ရှုပါ။ အခြားသီးခြားဘားအမျိုးအစားသို့မဟုတ်ဘားသည့်စနစ် ထက်တောင်းဆိုချက်ကိုအပျေါမှာမရရှိနိုင်ပါစေခြင်းငှါ။
HIGH တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိသံမဏိရဲ့အရက်ဆိုင်, အပြည့် Threaded မြင့်အစွမ်းသတ္တိသံမဏိဘား Threading အဆက်မပြတ်-ရှင်းပြီ Thread နှင့်အတူပူလွယ်ကူ မှစ. ထုတ်လုပ်ကြသည်။ အခွံမာသီးသို့မဟုတ် couplers အဖြစ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းလွဲချော်သွားတာနိုင်ပါတယ် ဘား၏မည်သည့်အချက်မှာဘားပေါ်ကို။ အချင်း 18 မီလီမီတာအထိထံမှမှ 50 အထိ ရွေးချယ်သည့်စနစ်အပေါ်မူတည်ပြီးမီလီမီတာ။ အဆိုပါဘားကနေကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်များတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် 1080/1230 (fp0.1k / fpk [N / mm2]) မှတက် 835/1030 ။
ချောမွေ့ HIGH တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိသံမဏိဘား ချောမွေ့ High-တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိသံမဏိအရက်ဆိုင်ထုတ်လုပ်နေကြပြီး ဖြစ်စေကြီးစွန်းမှာအအေး-roll ဟာ Thread နှင့်အတူပူ-ရှင်းပြီမှ။ အချင်း 20 မီလီမီတာအထိထံမှ 75 အထိ ရွေးချယ်သည့်စနစ်အပေါ်မူတည်ပြီးမီလီမီတာ။ အဆိုပါဘားကနေကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်များတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် 1080/1230 (fp0.1k / fpk [N / mm2]) မှတက် 835/1030 ။
အရက်ဆိုင်, အပြည့် Threading Threaded ဘား BAREX ဖြစ်ပါသည် အဆင့် 500/555 555/700 သို့မဟုတ် Add ၏အဆိုပါအဆိုပါသံမဏိဘားတစ်ခုတက်ဖို့အတွက် 63,5 မီလီမီတာအောင်မြင်မှုများမှသည်ချင်း 25 မီလီမီတာအောင်မြင်မှုများခုနှစ်တွင်ကြသူများကွေ။ hot- ဤပုံပျက်နေသောအရက်ဆိုင်ထုတ်လုပ်နေကြပြီး ရှင်းပြီ-on ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်လက်ဝဲလက်ချည်နှင့်အတူသံမဏိအရက်ဆိုင်ရှင်းပြီ။
TEREX အရက်ဆိုင်တစ်စိတ်တစ်ဒေသဘားပေါင်းလိုက်သော တို့ကမူပိုင်ခွင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောအနိမ့်တန်း TEREX ဘား BBV စနစ်များ GmbH သည်စီးပွားရေးအရအားဖြည့်ပုံမှန်အတိုင်းအလားတူနည်းလမ်းအားဖြင့်လှိမ့်ပေမယ့်တစ်ဦး Threaded ပရိုဖိုင်းကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ TEREX နှင့်အတူရှိနိုင်ပါ? ဘားဘို့ငါတို့မူပိုင်ခွင့်အမွှာ Shell က Coupler ဖြစ်ပါတယ် misaligned ဘား၏လျင်မြန်ပြီးလွယ်ကူနားချင်းဆက်မှီ။ အဆိုပါ TEREX? ဘား system ကိုချွေတာအဆင့်မြင့်အချိန်နှင့်လုပ်အားကမ်းလှမ်း တပ်ဆင်ပေမယ့်ပုံမှန်အားဖြည့်သံမဏိမှနှိုင်းယှဉ်တတ်နိုင်အခြားရွေးချယ်စရာ။ အားဖြည့်ဘားကဒီကွန်ကရစ်ပုံပျက်နေသောဖြစ်ပါသည်
, ကွန်ကရစ်အားဖြည့်သို့မဟုတ် klip တိုတောင်းသောသံဘောင်များကိုဘားထည့်ပါ။ဒေသခံ TIS နှင့်အညီရှင်းပြီနိုင်ပါတယ် စံချိန်စံညွှန်းအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်း (JIS ဘီ, BS, Din, ANZ, သံဗူးဥပမာ) ။ ပုံပျက်သောစံ 8 ထို 40 မီလီမီတာအကြားအချင်း Range အောင်မြင်မှုများမီလီမီတာအောင်မြင်မှုများရန်ခုနှစ်တွင်ပူလွယ်ကူ BBV Systems- Co. , Ltd အားဖြင့်နောက်ထပ်၎င်း၏ဖြတ်တောက်ခြင်း, Bende မှတဆင့် Added တန်ဖိုးနှင့်သံဘောင်နှင့်အညီ, Pre-ထည်လှောင်အိမ်ကိုပြုပြင်တာတွေ Be နိုင်သလားအရက်ဆိုင်ရှင်းပြီ
Form ကိုဆက်ဆံရေးပေါ်တွင်အသုံးပြုအပေါ်တုပ်နှောင်ရန်လေ့ရှိပါသလား။ formwork ပြားအတူတကွနှင့်ထံမှဖိအားကိုဆီးတား ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်ဦးသေဆုံးဝန်သယ်ဆောင်ရန်လုံလောက်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသကြပါလိမ့်မယ်သည်အထိလောလောလတ်လတ်ချပစ်ကွန်ကရစ်။ မြင့်တန်း BB ဘားမှကွဲပြားခြားနားသောဆက်စပ်ပစ္စည်း အချင်း၏တောင်ပံအခွံမာသီးသို့မဟုတ်ရေမှတ်တိုင် couplers တူသော 15 သို့မဟုတ် 20 မီလီမီတာစုဝေးတည်ဆောက်မှုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ပံ့ပိုးနိုင်ပါသည်။
ရပ်ဆိုင်းခြင်းချောင်းတွေရပ်ဆိုင်းမှုချောင်းတွေသို့မဟုတ်ကြိုးကွင်းအရက်ဆိုင်သုံးနိုငျ ယာယီသို့မဟုတ်အမြဲတမ်း။ ယာယီကြိုးကွင်းအရက်ဆိုင်, ရုတ်သိမ်းပေးရန်ရန်အသုံးပြုကြသည် ရိန်း, gantries, girders များသို့မဟုတ်အခြားဟိုက်ဒရောလစ် devices များအားဖွငျ့အရပျသို့မိုးသည်းထန်စွာလေးကိုင်ခြင်းနှင့်နိမ့်။ ရပ်ဆိုင်းမှုတစ်ဦးမှပူးတွဲချောင်းအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် မဟာသို့မဟုတ်ရပ်ဆိုင်းမှု cable ကိုဖွဲ့စည်းပုံ spanning တံတားနှင့်၎င်း၏ superstructure တစ်လှည်းရထားလမ်းအပြီးအပိုင် intermediate substructure ထောက်ပံ့မပါဘဲအရပျ၌ကငျြးပနိုငျတယျ။
worksite လေးလံ သည့်အကြီးစား LIFT ပြီးတော့ Comprise စနစ်များရဲ့ဘားဘား, သင့်တော်ဟာ BB လူအပေါငျးတို့တိကျတဲ့ LIFT ဆက်စပ်ပစ္စည်းငွေကြေးအခွံမာသီးနှင့်အညီ, ထိုသို့သော Split ကိုအမျှ tapered couplers ၏ချင်း၏မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိ Thread ငုံ့။ ဘားရုပ်သိမ်းသို့မဟုတ်နည်းလမ်းဖြင့်လျှော့ချနိုင်ပါတယ် နှုးကတိုးပြီးလုံးထိုင်ခုံပေါ်တွင်အုပ်စုခွဲအခွံမာသီးများကသော့ခတ်ထားနိုင်ပါတယ်ဟိုက်ဒရောလစ်ဘား jack နဲ့အမှန်တကယ်ဘားအနေအထား၏။
ကျနော်တို့ယေဘုယျအားဖြင့် Post-တင်းမာမှုများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေကြ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ဘူမိစနစ်များကို။ အထူးသဖြင့်ဆောက်လုပ်ရေးလေးခုအဓိကလယ်ကွင်းလိမ့်မယ် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာလူထုအခြေပြု, ဘူမိလူထုအခြေပြု, ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတူးဖော်ရေး & သတ္တုတွင်းနှင့်ကွန်ကရစ်အားဖြည့်: သတ်မှတ်ထားတဲ့စနစ်များနှင့်ထုတ်ကုန်, ဆိုလိုသည်မှာနှင့်အတူကုမ္ပဏီအားဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ အဆိုပါအမျိုးအစားဘူမိအရပ်ဘက်အားလုံးဘုံနှင့်ဖုံးလွှမ်း အထူးပြုအဆောက်အဦများနှင့်မြေဆီလွှာစက်ပြင်နှင့်ဆက်စပ်အရပ်ဘက်အင်ဂျင်နီယာများဆောက်လုပ်ရေးနည်းလမ်းများ။ APPLICATION သို့, SYSTEM ရဲ့ CATEGORY တွင်? / Civil, တည်ငြိမ်ခြင်း, ထင်ရှားသော, Anchor ၏ရိုးစွန်းဒေသများမှ, ရေကာတာ, စီးတံတား ,, တံတား, တွင်း, အခြားဆောက်လုပ်ရေး, ဆက်ပြီး-ဝေါလ်သည်မြေဆီလွှာစစ်ကူ, Slope, တစ်ဦးက Mini ကိုလိပ်ခေါင်း, အဆိုပါတင်းမာမှုလိပ်ခေါင်းသည်ဘူမိသင်၏ PRODUCT ဖောင်ဒေးရှင်း, လက်သည်း, မြေဆီလွှာ, မြေပြင် ,, Anchor, ချောင်း, Tie ဖြစ်ပါတယ်
မြေဆီလွှာကိုလက်သည်း။ မြေဆီလွှာကိုလက်သည်းဂျာမန်အတည်ပြုချက်သို့မဟုတ် client ကိုအညီ ‘s တိကျတဲ့လိုအပ်ချက်များကိုယာယီအဖြစ်သို့မဟုတ်အမြဲတမ်းလက်သည်းအဖြစ်ထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ်။ ဘိလပ်မြေ grout အတွက် embedded တင်းမာမှုအရက်ဆိုင်ပျော့များမှာ အမည်ခံချင်း၏သံမဏိချည် Barex သို့မဟုတ် Terex ဘားက 16, 20, 25, 28, 32, 40, 50 မီလီမီတာ။ တိကျတဲ့ကိစ္စများတွင်လည်းမြင့်မားသောတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိသံမဏိ BB ဘားတစ်ဦးသင့်လျော်သောမြေဆီလွှာလက်သည်း compose ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ MINI ပိုင် နှင့်အတူရရှိနိုင်သော Are သို့မဟုတ်လူပျိုနှစ်ချက်ချေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစနစ် Add တစ်ဦးက Mini ကိုလိပ်ခေါင်းအားလုံးတိကျတဲ့ထဲကဂျာမန်အတည်ပြုချက်ရန်အဆိုအရသို့မဟုတ်လိုင်းရဲ့လိုအပ်ချက်များထည့်ပါ။ အားဖြည့်သောဤလိပ်ခေါင်းအတွက် embedded အရက်ဆိုင်တစ်ခုခုဖြစ်ကြသည် အမည်ခံချင်း၏ပျော့သံမဏိချည် Barex သို့မဟုတ် Terex ဘား 28, 32, 40, 50 မီလီမီတာ, ဒါမှမဟုတ်အလယ်အလတ်-တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိသံမဏိ (555/700) အမည်ခံအချင်း 63,5 မီလီမီတာ၏ Barex သို့မဟုတ် Terex ဘားချည်။
ထင်ရှားသောကျောက်ဆူး မြင့်မား Anchor သို့မဟုတ်တင်းမာမှုလိပ်ခေါင်းလေ့အသုံးပြုကြသည် စိတ်အားတက်ကြွဖွယ်သို့မဟုတ်သက်ရောက်မှု buoyancy ကြောင့်ရေပေါ်ကနေမဆိုအခြေခံအုတ်မြစ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့။ အဓိကအားဖြင့်ရေအောက်တွင်အခြေခံအုတ်မြစ်ပြားသို့မဟုတ်အခြေစိုက်စခန်းပြား presure ထိုကဲ့သို့သောလိပ်ခေါင်းအားဖြင့်ကျောက်ချရပ်နားခံရဖို့ရှိသည်။
ချောင်းတွေက, လည်စည်း Tie သို့မဟုတ်ချောင်းတွေ Add, Tie Back ချိတ်ဆက်ခြင်းအခြေခံအဆောက်အဦးစနစ်တွေရဲ့လူပျိုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ဝေါလ် Are သို့မဟုတ် (ချည်) Add ဤနေရာတွင် Two-ဆန့်ကျင်စာရွက်သို့မဟုတ် kinda ပျင်းလိပ်ခေါင်းလိပ်ခေါင်းဝေါလ် Add ထိုအခါသူတို့ကိုကာကွယ်မည်တူးဖော်မှုစဉ်အတွင်းပြိုလဲ မှစ. ဖြစ်ကြောင်းနှင့်မြို့ရိုးနှစ်ထပ်စပ်ကြားအဆိုပါခုနှစ်တွင် backfill ။ ဘုံ application ကိုကြိုးနဲ့တုတ်ဖို့အသုံးပြုအဏ္ဏဝါဆက်ဆံမှုတစ်ခုဖြစ်သည် နောက်ပိုင်းစီးတံတားမြို့ရိုးကိုဖွဲ့စည်းရန်အရပျသို့မောင်းနှင်ဖြစ်ကြောင်းအတူတကွအမြဲတမ်းစာရွက်ပုံနံရံများ။
တင်းမာမှုများလိပ်ခေါင်း ပြောင်းလဲနေသောဝန်အောက်မှာတင်းမာမှုလိပ်ခေါင်း site ပေါ်တွင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများပေါ် မူတည်. တစ်ခုတည်းချေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး (SCP) သို့မဟုတ်နှစ်ဆချေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး (DCP) နဲ့ကွပ်မျက်ခံရနိုင်ပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက် Splices couplers နှင့်လိမ်အားသော့ခတ်အခွံမာသီးများကချိတ်ဆက်ခံရဖို့ရှိသည်။ အဆိုပါ splice petrolatum တိပ်နှင့်အပူအင်္ကျီလက်ကျုံ့အားဖြင့်ကာကွယ်ထားချေးဖြစ်ပါတယ်။
Panel ကိုငြမ်းနှင့်ကွန်ကရစ် Form ကိုအမျိုးအစားများ Formwork ။
ကျွန်းသစ် formwork ပိုမိုရိုးရာ အဆိုပါ formwork ပု, မှတ်ဉာဏ်ဆိုက်သစ်ထဲက ထွက်. အထပ်သား ons သို့မဟုတ်စို-resistant Particleboard Add တည်ဆောက်ထားသည်။ ဒါဟာထုတ်လုပ်ရန်ရန်လွယ်ကူပေမယ့် time- ဖြစ်ပါတယ် ပိုကြီးတဲ့အဆောက်အဦများအတွက်စားသုံး, နှင့်အထပ်သားမျက်နှာအတော်လေးတိုတောင်းသောသက်တမ်းရှိပါတယ်။ အလုပ်သမားဘယ်မှာဒါဟာနေဆဲကျယ်ကျယ်အသုံးပြုသည် ကုန်ကျစရိတ်ပြန်သုံးနိုင်သော formwork များဝယ်ယူရန်တို့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ထက်နိမ့်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာအစအရှိဆုံးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ် ရှုပ်ထွေးကဏ္ဍများကိုအသုံးပြုရန်စေခြင်းငှါ, formwork ဒါကြောင့်အခြားစနစ်များအသုံးပြုနေကြသည်ကိုပင်ရှိရာ။
အင်ဂျင်ကို Formwork စနစ်။ဤသည် formwork အကြံအဖန်တွေချည်း module တွေထဲကတည်ဆောက် သတ္တုဘောင်ခ (များသောအားဖြင့်သံမဏိသို့မဟုတ်လူမီနီယမ်) နဲ့ပစ္စည်းအတွက်အလိုမျက်နှာပြင်ဖွဲ့စည်းပုံ (သံမဏိ, လူမီနီယံ, ကျွန်းသစ်, etc) ရှိခြင်းနှင့်အတူလျှောက်လွှာ (ကွန်ကရစ်) ဘက်မှာဖုံးလွှမ်းကြ၏။ formwork စနစ်များနှစ်ခုအဓိကအားသာချက်, ရိုးရာသစ် formwork နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက, ဖုံးအုပ်ခြင်းနေစဉ်ဘောင်နီးပါး indestructible ဖြစ်ပါတယ်ဆောက်လုပ်ရေး၏မြန်နှုန်း (modular စနစ်များ pin ကို, ကလစ်, ဒါမှမဟုတ်အလျင်အမြန်အတူတူဝက်အူ) နှင့်အနိမ့်ဘဝ-သံသရာကုန်ကျစရိတ် (အဓိကအင်အားစုရှိနေသော်လည်း၎င်းတို့ဖြစ်ကြသည်။ သစ်သားနဲ့လုပ်ထားတဲ့လျှင်, ရန်ရှိစေခြင်းငှါ အနည်းငယ်အကြာတွင်အစားထိုးခံရ -) အသုံးပြုမှုပေမယ့်ဖုံးအုပ်သံမဏိသို့မဟုတ်လူမီနီယံနှင့်ဖွဲ့လျှင်ပုံစံစောင့်ရှောက်မှုနှင့် applications များပေါ် မူတည်. နှစ်ထောင်အသုံးပြုမှုအထိအောင်မြင်ရန်နိုင်သည် – သို့မဟုတ်အနည်းငယ်တစ်ဒါဇင်။
re-အသုံးဝင်သောပလပ်စတစ် formwork ။ဤရွေ့ကား interlocking နှင့်မော်ဂျူလာစနစ်များကိုအသုံးပြုကြသည် ကျယ်ပြန့် variable ကို, ဒါပေမယ့်အတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့, ကွန်ကရစ်အဆောက်အဦများတည်ဆောက်။ အဆိုပါပြားပေါ့ပါးပြီးအလွန်အားကောင်းတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကတန်ဖိုးနည်းများအတွက်အထူးသဖြင့်သင့်လျော်ဖြစ်ကြောင်း , အစုလိုက်အပြုံလိုက်အိမ်ရာစီမံကိန်းအတွက်အထောက်ကူ။
အမြဲတမ်း insulator တွင်လည်း Formwork ။ ဤသည် formwork များသောအားဖြင့်, site ပေါ်တွင်စုဝေးလျက်ရှိသည် ကွန်ကရစ်ပုံစံများ (ICF) ကာကှယျထဲက။ ကွန်ကရစ်ပြီးနောက် formwork အရပျ၌အဲ့ဒီအချိန်မှာ ပျောက်ကင်းအောင်ကုသထားပြီး, နှင့်ဝတ်ချောများအတွက် EPS အလွှာများနှင့်ပေါင်းစပ် furring ချွတ်အတွင်း utilities ကို run ဖို့အမြန်နှုန်း, အစွမ်းသတ္တိကိုသာလွန်အပူနဲ့ acoustic insulator တွင်လည်း, အာကာသ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အားသာချက်များကိုပေးလိမ့်မည်။
Cofforကွန်ကရစ်အတွက်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုတည်ဆောက်မယ့်အခြေခံအဆောက်အဦးနေထိုင်-In-ရာအရပျ formwork စနစ်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာဒေါင်လိုက်မာကြောခြင်းဖြင့်အားဖြည့်နှစ်ဦးကို filtering ကို Grid ၏ရေးစပ်နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်ခေါက်နိုင်ပီသသော connectors အားဖြင့်ဆက်နွယ်နေသည်။ တစ်ဦးကစံ panel က 1,10 MX 2,70 မီတာ (3 ” 8 ‘x’ 9) 32.7 ကီလိုဂရမ် (72 ပေါင်) အလေးချိန်နှင့်လက်ဖြင့်သို့မဟုတ်စက်မဆိုနည်းလမ်းဖြင့်သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ Coffor ထားပွီးနောကျ, ကွန်ကရစ်ဟာ Grid အကြားသွန်းလောင်းနေသည်: ကွန်ကရစ်ပိုလျှံရေဆွဲငင်အားများနှင့်လေကြောင်းခရီးဖြင့်ဖယ်ထုတ်ပစ်သည်မှာလည်းဖယ်ထုတ်ပစ်သည်။ Coffor ကွန်ကရစ်သွန်းလောင်းပြီးနောက်ဆောက်လုပ်ရေး၌တည်ခြင်းနှင့်အားဖြည့်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ဆောက်လုပ်ရေး၏မဆိုအမျိုးအစား Coffor နှင့်အတူတညျဆောကျခံရနိုင်သည်တစ်ဦးချင်းစီအိမ်များ, မြင့်အဆောက်အအုံများအပါအဝင် Multi-ပုံပြင်အဆောက်အအုံများ, စက်မှု, စီးပွားဖြစ်သို့မဟုတ်အုပ်ချုပ်ရေးအဆောက်အဦ။ လူထုအခြေပြုအကျင့်ကိုကျင့်၏အတော်ကြာအမျိုးအစားများ Coffor နှင့်အတူလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ Coffor လုံးဝစက်ရုံထဲကနေစုဝေးကယ်နှုတ်တော်မူ၏ဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမစုဝေးမှုတည်ဆောက်ရေး site ပေါ်တွင်လိုအပ်ပေသည်။
In-Place-နေဖို့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ formwork စနစ်များကို ။ ဤသည် formwork များသောအားဖြင့်, site ပေါ်တွင်စုဝေးလျက်ရှိသည် အကြံအဖန်တွေချည်းဖိုင်ဘာ-အားဖြည့်ပလပ်စတစ်ပုံစံများထဲက။ ဤရွေ့ကားဆွန်းပြွန်များ၏အသွင်သဏ္ဌာန်၌ရှိကြ၏ နှင့်များသောအားဖြင့်စစ်ကြောင်းများနှင့် Piers များအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ ကွန်ကရစ်ပြီးနောက် formwork အရပျ၌အဲ့ဒီအချိန်မှာ ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနှင့်ပြုမူအဖြစ် axial နဲ့ညှပ်အားဖြည့်အဖြစ်ကွန်ကရစ်အကျဉ်းချထားခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောချေးများနှင့်အေးခဲ-နွေးထွေးသံသရာအဖြစ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်သက်ရောက်မှုများ, ဆန့်ကျင်တားဆီးဖို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် formwork ။အထက်ဖော်ပြထားတဲ့တင်းကျပ်မှိုမတူဘဲ, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် formwork ကွန်ကရစ်၏လျော့ပြေ၏အားသာချက်ကိုယူပြီးအလွန်အမင်း optimized ဗိသုကာလက်ရာမြောက်စိတ်ဝင်စားဖို့, အဆောက်အဦပုံစံများကိုဖန်တီးရန်ထည်၏ပေါ့ပါးသော, မြင့်သောအစွမ်းသတ္တိကိုစာရွက်များကိုအသုံးပြုတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် formwork အသုံးပြုခြင်းကြောင့်  အားဖြင့်သစ်ကိုကွန်ကရစ်အဆောက်အဦများအတွက်သိသာထင်ရှားသောဂျစွမ်းအင်ချွေတာဘို့အလားအလာရာပူဇော်သက္ကာကိုသိသိသာသာလျော့နည်းကွန်ကရစ်အနေနဲ့ညီမျှအစှမျးသတ်တိ prismatic အပိုင်းထက်အသုံးပြု optimized အဆောက်အဦများ, ချခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သည်။
ဖိုင်ဘာဖန်ဆန်ခါသံမဏိဆန်ခါ, ရေကန်၏အစွန်းန်းကျင်ပလပ်စတစ်ရဆေိုးလျတ်ပြီးစီးဖုံး manholes, သံအဖုံးများ, အပ်ချုပ်သူ, FRP-ဖန်မျှင်ထည်သံမဏိပလတ်စတစ်ဆန်ခါကျဇယား-သို့ကာစ်-သံ MANHOLE မျက်နှာဖုံး, ရေကူးလျှံသွန်းလေ၏။ ရေနုတ်မြောင်း Gully မြောင်းဆန်ခါ, ဥသေတ္တာမျက်နှာကျက်အသားကင်, သစ်ပင်စောင့်တပ်ဖွဲ့ဆန်ခါ, ကွန်ကရစ့်သတ်ထားခြင်းကိုအတွက် embedded စွန့်ပစ်ထောင်ချောက်အစားအစာမှုန်ဆန်ခါ။ အဆိုပါ footpath, ဘောင်ကင်သစ်ပင်၏အခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ပေးသည်။ ကြမ်းပြင် Mat နေသောလူသွားလမ်း, panel ကိုလိုက်ကာကင်မျက်နှာဖုံးလုပ်ကွက်အလငျး / လေကြောင်း filtration / လေဝင်လေထွက် slat ။
CHANCON * Shannon လေဆိပ် http://www.chancon.co.th လျ: 02 4510780-1 #Grating ကျွမ်းကျင်သူများက: 081 9327894 GFRP Composite သံမဏိ Gully သည့်ကားလမ်းခြစ်ကင်, Culvert ပြွန်တုတ်ကျင်း သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းမြောင်း, Cast ကိုကျဇယားသံ Manhole Grid Catch အင်တုံမျက်နှာဖုံးများ။ , အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆန်ခါသတ္တု Expanded, Access ကိုကြမ်းပြင်လူသွားစင်္ကြပလက်ဖောင်းပေါ်မှပေါက်ဖွားလာသူအကြီးစားတာဝန်ဆုပ်ကိုင် Struts Channel ကို, ဖောက်ထား Air ကိုစီးဆင်းမှုလူမီနီယံကင်, Yard လွှတ်ဆင်းလမ်း Edging အောကျခံခုံ, ကာဗွန် serrated ဘားသံမဏိ, Fastener Clip ညှပ်ဆန့်သံမဏိပြားများ, ကင်, Formworks Tie လှံတံ Wing lock Saddle သော့ခတ်။ ခွံမာသီး, ဦးထုပ်ကျဇယားယိုစီးသံ, ပိုက်ထုပ်အမျှင်ဓာတ်ပေါင်းစပ်စေး, အအကြံပေးအဖွဲ့ရဲ့ Holger Hansen ဦးပိုင်, ဦးထုပ်ယိုစီးမှုသည်းခြေ encrusted ဦးထုပ်အဖုံးပိုက်ရေကန် filter ကို, Mat groove ပိတ်အဖုံးကိုသွန်းလေ၏။ အလေးချိန် ဦးထုပ်ပတ်ပတ်လည် – စတုဂံ, ဘိလပ်မြေ, သံမဏိစွန့်ပစ်စုဆောင်းခြင်းများအတွက်ကွန်ကရစ်အဖုံး, ဖုံးနဲ့ရေကုသမှုစနစ်များကိုအားဖြည့်, , ဂရိတ်အရသာ, သံမဏိကင်အဖုံးချက်ချင်း access ကိုဆန်ခါ။ frame ကင်ကိုက်ထိုလမ်းဘေးရဲ့အစွန်းတစ်လျှောက်တွင်သစ်ပင်ကျေးရွာအုပ်စုလှံတံရွှေ့ပြောင်းခံရဦးရေနုတ်မြောင်းမြောင်း, matrix ကိုပျက်ကွက်, ဝါယာကြိုးကွက်, ဝါယာကြိုးကွက်, frames များကိုအတူအပေါက်တွေ, ရေ, သံမဏိ၏အခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ပေးသည်, သံ, ကာဗွန်ဖိုင်ဘာဖြော, ဖောက်ထားတွင်းခေါက်။ , အစင်းဘဲ, ကြက်သား, မိုးရေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်, မြင့်တည်ဆောက်ခြင်း, စလစ်, သံလမ်း, အနံ့ကြောင့် mini ကိုအသားတင်, ပိတ်ပင်တားဆီးမှုခင်း, အပြင်ပန်းအလှဆင် Koi ကန်, Landscaping, ကြွေပြား, အခင်းအရှိန်မြှ။ တစ်ဦး Mutant နှင့်အတူ install လုပ်ဖို့, DIY လွယ်ကူပါတယ်။ အဆိုပါမီးခွက်, မျက်နှာကျက်သည် T-bar ကိုကင်, ဒီလိုပါပဲအလင်း gauzy ကုလားကာမြို့ရိုးနံရံတစ်ခုပေါ်မှာမျက်နှာကျက် tile ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ ခြံစည်းရိုး panel ကအခန်းတစ်ခန်း Divide partition ကို။ utility အလှဆင်မျက်နှာကျက်မြတ်သောအပတ္တာ slat လိုက်ကာ Fiat အာရဇ်ပင် pergola ညေ, အကာအကွယ်ကွက်အဖုံးငှက်, မြွေ, ငှက်, ရှဉ့်နှင်ထုတ်ခြင်းနှောက်ခြောက်ခေါင်း, partition ကိုပြားစညျးဝေးပှဲ။ မွေ့လျော်, polycarbonate, ဗီနိုင်း, ရုံးပိတ်ပင်တားဆီးမှု, ရုံး, ရေချိုးခန်း, လေအေးပေးစက်စနစ်, ဝါယာကြိုးတစ်ဦးကအခန်း Divide, High-grade ကိုပယ်ပြီး frosted ။ အဆောက်အဦးကိုခံထိုက်သောသူ, လေဝင်လေထွက်ကင်ဆိုင်းငံ့မျက်နှာကျက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, Splashboard / Weatherboard / Slat လိုက်ကာ / Trellis အရိပ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ,. အမှတ်တရ Panel များ, အရောင်အသွေးစုံသောအထွေထွေ Sun က Screen ကို Partition ခွဲနေကာ, Anti-Bird ကိုထိန်းချုပ်ရေးခွငျထော, Mini ကိုအလှဆင်ခြစ်ကုလားကာ, ပန်းပုဇယားကွက်အဖုံးဆဲလ်မျက်နှာကျက်လျှောက်လွှာဖွင့်လှစ်ခဲ့: ရုံးခန်းနေရာများ, အစည်းအဝေးအခန်းတစ်ခန်း, စူပါမားကတ်, ကျောင်း, စင်္ကြံ, အိမ်သာ, ဆေးရုံ, Re-အလှဆင်အကျင့်ကိုကျင့် ,. ကုလားကာမြို့ရိုးအပြား, မျက်နှာကျက် အဆိုပါ bulkhead partition ကိုလှည့်ပတ်ခြံစည်းရိုး။ အသားတင်မြတ်သော slat လိုက်ကာ ပတ္တာ pergola မြို့ရိုးကိုခေါက် Weir အဆိုပါလမ်းဘေးရဲ့အစွန်းမှာရေထဲမှာမျောကင်ဖြီးထောင်ချောက်အပျက်အစီးများခွဲ။ အနည်အနှစ်များထောင်ချောက်ဖုန်မှုန့်, အရွက်, စက္ကူ, စားသောက်ကုန်စွန့်ပစ်သည့်ကင်ရေကိုထိန်းချုပ်ရန်။ အဆိုပါလမ်းဘေးတစ်လျှောက်တွင်ဘေးထွက်သံလမ်း, မြှို့နယ်၏စံသတ်မှတ်ချက်အရသိရသည်။ ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနနှင့်မြို့စီမံကိန်း ကျေးလက်လမ်းများဦးစီးဌာန အမျိုးသားအိမ်ရာအာဏာပိုင် အစားသံမဏိအခြေခံအုတ်မြစ်မြောင်းခင်း, PP PVC PE ကို ABS ရေကူးပလတ်စတစ်ဆန်ခါ ETA, တုတ်ကျင်းရေနုတ်မြောင်းသည့်ကားလမ်းခြစ်, footbath အနီးရှိဆန်ခါဖုန်မျက်နှာပြင်သည့်ကားလမ်း, အရွက်ထောင်ချောက်ဆင်လုံခြုံယိုစီးမှုအသွားအလာကိုခြစ်ကျွမ်းကျင်သူပလပ်စတစ် ,. အစားထိုးဖန်အတားအဆီးမျက်နှာဖုံးစျေးဆိုင်, အဆောက်အဦးများ, မြို့ရိုး, အပြင်ပန်းဝတ်, အခင်းစာရွက်များကျေးရွာအုပ်စု။ ခြေလျင်ခင်း, အပေါ်ကိုခါးပတ်ကနေသဟဇာတထုတ်ကုန်လမ်းခင်းများနှင့်ဒေသခံပန်းခြံများမြှင့်တင်ရန်။ ခရိုင်ကျန်းမာရေးလျှပ်စစ်လယ်စင်မြင့်ရှိုးများ, ပြိုင်ပွဲ, မြက်ပင်လုပ်ကွက်, ပန်းကန်, အလှဆင်မြို့ရိုးအပြား, အပြင်ပန်းလိုက်ကာ, မျက်နှာကျက်, မြို့ရိုး, eaves, gabled ရှေ့မုတ် Calais Partition ခွဲတံခါးများယုဒလူရဲ့အစောင်းများနှင့်ဖယောင်းစက္ကူစာရွက်အရွယ်အစား stairs ။ ပလပ်စတစ် coated ဝါယာကြိုး ကနေရှေးခယျြဖို့ဒီဇိုင်းများ ဖြတ်ခြင်းနှင့်အပိုဆောင်းအလှဆင်ပရိဘောဂ, နံရံဟာဖယောင်းစက္ကူနိုင်ပါတယ်ဖယောင်းစက္ကူအလှဆင်လှပထူးခြားသောနေရာများတွင်ပါဝင်သည်။ သံချေး, ချေး, အပူ, မီး, အက်ဆစ်, အယ်လကာလီဓာတုပစ္စည်းမှခံနိုင်ရည်လူမီနီယမ်ဖွဲ့စည်းမှု, ဖွဲ့စည်းမှု, အက်ဖ် RP, စွမ်းအင်ကယ်တင်တော်မူ၏။ ခြ, မှို, ဖောကြိုက်နှစ်သက်မ Non-အဆိပ်မဟုတ်သောမီးနှောင့်နှေး, ဖိုက်ဘာမှန်သို့မဟုတ်ဖန်ဖိုင်ဘာအထူးဖြစ်ပါသည်, Siam SSG, အမေရိကန်, အမေရိကန်, အာရှပစိဖိတ်, Fibergrate, Strongwell, Webforge, အခင်းပြုပြင်, ဖျင်မျက်နှာပြင် Knack ။ , epoxy, အီးလွယ်ကူ Pot, လြယ္ကူ Pot က c E ကို, အခင်း, epoxy, polyurethane, PVC, ကော် ,. ဇီဝ, ဇီဝ, PU ကွန်ကရစ်, အပေါ်ယံပိုင်း, ကျောက်ခက်, PE စက်ရုံကြမ်းပြင်စားသောက်ဆိုင်, ဟိုတယ်မီးဖိုချောင်, coated ရေတွင်းများ, ဓာတုယဉ်, acrylic သုတ်ဆေး, စက်မှုကြမ်းပြင်, ဒါကိုတော့ရေစိုခံတာပြုပြင်, အပေါ်ယံပိုင်း, ရေစိုခံတာတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ ကုန်းပတ်, ရေကူးကန်ဓာတုပစ္စည်းမြောင်းဖိုင်ဘာဖန်, အိမ်ခေါင်မိုးစာရွက်သတ္တုအခြားရွေးချယ်စရာပစ္စည်းများ, သံမဏိ, ကျောက်, သစ်သား, အတု, ဒြပ်, wpc ပလပ်စတစ်, ဇီဝ, ပြန်လည်, ပစ္စည်းကိရိယာများ, Fla ရေနုတ်မြောင်း, အိမ်ခေါင်မိုးရေနုတ်မြောင်း။ မျက်နှာပြင် wear, သက်ရောက်မှု, ပြားချပ်ချပ်ရေကန်၏အစွန်းန်းကျင်လျတ်မြောင်း။ အဆိုပါယဇ်ပလ္လင်ပတ်လည်လုံးလေးများ, ရော်ဘာခင်းပြား, စက်ပစ္စည်း, pallets, လုပ်လေ၏စင်ပေါ်, ကြမ်းပြင်, အဆောက်အဦးများ, ဘလောက်ခင်းလုပ်ကွက်, တီကောင်မြက်-ချောခင်း။ Feng Shui မွမ်းမံ ပစ္စည်းကိရိယာ, Fla ရေနုတ်မြောင်း, အိမ်ခေါင်မိုးရေနုတ်မြောင်း, မျက်နှာပြင် wear, သက်ရောက်မှု, ရေကူးကန်, စာရွက်များ, Shutter, စာရွက်ရော်ဘာကြမ်းပြင်ယဇ်ပလ္လင်ပတ်လည်ဖုံး, စက်ပစ္စည်း, pallets, လုပ်လေ၏စင်ပေါ်, ကြမ်းပြင်၏အစွန်းန်းကျင်မြောင်းလျတ်။ အိမ်, ပိတ်ပင်တားဆီးမှုခင်းလုပ်ကွက်, တီကောင်မြက်-ချောခင်း။ Feng Shui မွမ်းမံ ပစ္စည်းကိရိယာ, Fla ရေနုတ်မြောင်း, အိမ်ခေါင်မိုးရေနုတ်မြောင်း, မျက်နှာပြင် wear, သက်ရောက်မှု, ရေကူးကန်, စာရွက်များ, Shutter, စာရွက်ရော်ဘာကြမ်းပြင်ယဇ်ပလ္လင်ပတ်လည်ဖုံး, စက်ပစ္စည်း, pallets, လုပ်လေ၏စင်ပေါ်, ကြမ်းပြင်၏အစွန်းန်းကျင်မြောင်းလျတ်။ အိမ်, ပိတ်ပင်တားဆီးမှုခင်းလုပ်ကွက်, တီကောင်မြက်-ချောခင်း။ Feng Shui မွမ်းမံ
GFRP Composite Manhole အဖုံး (အဖုံးပြွန်ဖိုင်ဘာပေါင်းစပ်စေးဆန်ခါ) www.chancon.co.th အထူးကု Solutions ဆန်ခါနှင့်အပုံ installation ကို: အဆောက်အဦးအပြင်က Round Manhole မျက်နှာဖုံးများ, ရင်ပြင်, Rectangle, စက်ဝိုင်းမြို့ပတ်, ရိုးရှင်းသော Culvert Gully, Tile မြှောင်ဆဲလ်မျက်နှာကျက်ခြစ်လုပ်ကြံ။ , Pass ကိုလမ်းမြေအောက်ခန်းလမ်းဘေး, Manhole ချိတ်ပိတ်ပလပ်စတစ်ဇယားကွက်ခင်း, လက်အပေါက် LIFT Lifter, ထွက်ကိုရှင်းလင်း, ခြံဝင်းသို့ဝင်ကြမ်းပြင်ပန်းရေချိုးခန်းယိုစီးခြစ်အင်တုံ, လူနေထိုင်ရာတုတ်ကျင်း သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းဆဲလ်ဖမ်း, အပ်ချုပ်သူ, စီးပွားရေးကျဆင်းမှုဖုံး, ပိတျဆို့နတေဲ့ပိုက်ပြီးပုံသွင်းလွယ် Grey ကသံ, stainless အစားထိုး Casting ။ ကူးမှုပိုးဧရိယာ, အစားထိုးသံမဏိ, Wood ကသစ် WPC ဖိုင်ဘာဘိလပ်မြေ, Checker ဘဲပန်းကန်, Fittings, သန့်ရှင်း, ပေါက် box ကိုဖယ်ရှားခြင်း, ပိတ်ပင်တားဆီးမှုပန်းရံခင်းယူနစ်, ပန်းကန် drainer, Channel ကိုဖောက်တံ, သင်္ဘော, လေဝင်လေထွက် Valve, Filter ကို, ရေကူးကန်, စုပ်စက်, သင်္ဘော, ။ , ချေးခုခံဘောင်, ရာဇမတ်ကွက်, မိုးသေနတ်သမားရေ ,.အမှိုက်ပုံးထဲထိန်သိမ်း, ဥသေတ္တာအလင်းပြန်မှုမျက်နှာကျက်အသားကင်အလင်းပေးခြင်းမျက်နှာပြင် Filter ကိုမီဒီယာပျံ့ Panel ကို, DIY Abstract ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းဘုတ်အဖွဲ့ရေကန်အဏ္ဏဝါ Aquarium, HVAC လေကြောင်းအားနည်းချက်ကို acrylic ပြန်လာ / နှစ်ချက် deflecton နဲ Grid Louver FRP ထုတ်ကုန်များ, GFRPS, Glass ကို Fiber စစ်ကူသံဘောင်များကို Polymer အမျိုးအစား, စစ်ကူဖန်မျှင်ထည်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ, Composite ။ အဆောက်အဦးပစ္စည်းများ, ဗီနိုင်း Ester စေး, အလှဆင်အတွက် Root စည် bollards ပင်သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့လမ်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုပန်းပု, Landscaping ပြင်ပဥယျာဉ်ကြီးသစ်ပင်ခြစ်, သစ်ပင် Ring ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစောင့်တပ်ဖွဲ့ခြစ် Paver Frame ကဖုံးလမ်းသွားလမ်းလာ, လမ်းမလမ်း, ပုံသွင်း, pultrusion, welded bearing bar ကိုဖုံးအုပ်, profile များကို pultuded ။ ရှေ့လျှောက်လမ်းပေါ်မှာနှစ်ချက်ကားဂိုဒေါင်အခင်း, ပလက်ဖောင်း, တုတ်ကျင်းအဖုံးများ, မြောင်း, မျိုးတွင်အဘို့ဒြပ်ပေါင်းဆန်ခါ, ကေ့လှေကား, လှေကားအုံနင်းမဟုတ်သောဆန့်ကျင်စလစ်နှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်လှေကား, ကျယ်ပြန့်ခြေလှမ်း, နင်းအဖုံးများ, Handrail, အခြေခံအဆောက်အဦးပုံသွင်း, စံပြ, ဖန်သားပြင်ဝတ် ,.မီဒီယာထောက်ခံမှု, လေကွက်, လက်ရန်း, လမ်းလျှောက်လမ်း, Multi ဇယားကွက်, ဖုံးအုပ်ခြင်း, ခွက်, gritted, minimesh, ဖင်နိုလစ်, ဘုံ, သစ်ရွက် polyester စေး, Palette Partition ခွဲတံခါးပေါက်ကို Windows ,.
Grating_Manhole_Expert | ထုတ်လုပ်သူလက္ကား – လက်လီ | စုဆောင်းမှုအေးဂျင့်ကတော့အရောင်း, ကားရောင်းဝယ်ရေး ,, အဆိုပါအေးဂျင့်ခြင်း, ဖြန့်ဖြူး
အမေရိကန်ဝက်ဘ်ဆိုက်: Www.chancon ။ .co.th, Http://GratingThai.com, Http://GratingThai.co.th သည်ကို http: // ဖန်မျှင်ထည်ခြစ် – pitting ဦးထုပ်သံမဏိပိုက်ထုပ်အဆိုပါ .com ။
FaceBook အပေါ်: Www.facebook.com/GratingThai, www.facebook.com အေ /FrpFiberGrating.chancon, Www.facebook.com/FrpGrating.ManholeCover
TwitterShare: Https://twitter.com/GratingThai ။ https://plus.google.com/+ChanconTh